3403s न्यू योर्क सरकार कुवोमोले कोरोनाभाइरस महामारी - //२25/२०२० मा ब्रीफिंग राख्यो images and subtitles
तपाईंलाई आज यहाँ हुनु भएकोमा धन्यवाद। मलाई लाग्छ तपाईं को हो भनेर थाहा छ यहाँ मेरो टाढाको अधिकार, डिप्यूट विभागको सुपरिटेन्डेन्ट वित्तीय सेवाहरू। मसँग लामो समय भयो। उहाँ हाम्रो स्वाट टीमको भाग हुनुहुन्छ। हामी साम्राज्यको राष्ट्रपति छौं कॉलेज, DR ZUCKER, LISA बनाउनुहोस् डेरोसा, र बुजट निर्देशक। हामीसँग धेरै रुचि छ समाचार टुडेलिसा डेरोसा, र बुजट निर्देशक। हामीसँग धेरै रुचि छ समाचार आज, ती चीजहरू चलिरहेका छन्। हालको स्थिति, हामी अझै पनि छौँ व्यापार जाँदै छ। हामीसँग अन्य छैन एपीएक्सलाई हिट गर्नुहोस्। याद राख्नुहोस् कि लाइन जान्छ, आईटी उच्च पोइन्टमा आउनेछ, आईटी टिप्स आउनेछ, आईटी पछाडि तल जान्छ। हामी त्यस मार्गमा भइरहेका छौं मौनटाइन। ती संख्यामा भएका संख्याहरू आउँदैछन्, %०% अझै पनि आफै पुन: समाधान। लगभग १%% जनताले कसको परीक्षा लिन्छ सकारात्मक आवश्यकता अस्पताल। र त्यहाँ DEGREES छन् अस्पताल। तर कुल युनिभर्स कि आवाश्यकता आवश्यक छ १%%। हामी प्रोजेक्ट मोडेलहरू प्रयोग गर्दछौं। हामी कर्नेलले गर्छौं प्रोजेक्शन मोडेल, हामी प्रयोग गर्छौं म्याकेन्जी, डिपार्टमेन्ट अफ स्वास्थ्य प्रोजेक्ट मोडेल गर्दछ। र TheYARE महत्वपूर्ण कारण तपाईं तिनीहरू प्रोजेक्ट गर्दै हुनुहुन्छ POSSIBLE PROPER JEKER TO and आवश्यकताको लागि योजना बनाउँदै। प्रोजेक्ट मोडेल केवल हुन् त्यो, उनीहरूका मोडेलहरू हुन् परियोजनाहरू, तिनीहरू होइनन् आवश्यक परिभाषा, तर यो हामीसँग केवल डिभाइसिस छ योजना गर्न, सही? डाटा अनुसरण गर्नुहोस्, अनुसरण गर्नुहोस् डाटा, डाटा अनुसरण गर्नुहोस्। वास्तविक अस्पतालहरु छन् भन्दा उच्च दरमा सारियो प्रोजेक्ट मोडेलहरू, ती सबै भन्दा बढी प्रोजेक्ट मोडेलहरू। त्यसोभए OWVIOUSLY थियो चिन्ता गर्दै। कारण त्यो उच्च प्रभाव दर अझ द्रुत माईन्स अस्पताल र क्षमता मा त्यो लागि क्रिष्टिकल पोइन्ट छ अमेरिका जाने मान्छेहरूको संख्या हो भित्र अस्पतालहरु। सही अब हामी के हेर्दैछौं १ 140०,००० केस आउँदैछ अस्पतालहरूमा, अस्पताल क्षमता 53 53,००० बिडहरू छ। त्यो समस्या हो। हामी 40०,००० को बारेमा हेरिरहेका छौं आईसीयू केसहरू भित्र आउँदैछन् अस्पतालहरु हामीसँग ,000,००० आईसीयू बेडहरू छन्। त्यो एउटा चुनौती हो। यसको लागि आईसीयू बिड के हो उद्देश्यहरू? साधारण एक खाट संग एक बिस्तर भेन्टिलर भेन्टेलर सब भन्दा ठूलो हो उपकरणको लागि महत्वपूर्ण PIECE एक सहज देखभाल यूनिट बिस्तर यो कारणले गर्दा यो एक प्रासंगिक हो बेकार र मानिसहरूलाई अझ बढी आवश्यक छ उपयोगिता भन्दा उपयोगी। हामी के गर्न चाहन्छौं? केसहरूको संख्या घटाउनुहोस् अस्पताल भित्र आउँदैछ, स्लो भित्र आउने केसहरूको संख्या अस्पतालहरु। त्यो के हो DR। FAUCI छ हरेक दिन टिभीको बारेमा कुरा गर्दै। यात्रा फ्लैट, फ्ल्यास यात्रा, फ्ल्याट कर्वे। मान्छे आउँदै को संख्या ढिला अस्पतालहरूमा पनि हामी डील गर्न सक्दछौं अस्पतालहरूमा उनीहरूको साथ। र हामी त्यसमा काम गरिरहेका छौं। उही समयमा, तपाइँलाई बढाउनुहोस् अस्पताल क्षमता, सही? संख्या खाली गर्न तान्नुहोस् अस्पताल भित्र आउदै गरेका केसहरू, MEANWHILE तपाइँको अस्पताल उठाउनुहोस् क्षमता। हामी दुवै काम गर्दैछौं सरल। हामी एक दिनबाट आएका छौं। केसहरूको संख्या घटाउनुहोस् भित्र आउँदै, यात्रा फ्लैट, स्प्रेड फ्ल्ट्स सूचना स्लाइड गर्नुहोस्। हामी केहि गर्न सक्दछौं। त्यो व्यावहारिक प्रतिबन्ध छ कर्मचारीहरू, सामाजिक डिस्टान्सिंग, GYMS बन्द गर्नुहोस्, बन्द गर्नुहोस् रेस्टोरन्टहरू। नयाँ यॉर्क शहर जहाँ एक मुद्दा हामीसँग घनत्वको एक उच्च स्तर छ हामी विशेष मा चाहन्थे न्यूयॉर्क सिटी पार्क, विशेष गरी युवा मानिसहरूसँग, म पनि हुँ प्रत्यक्ष म गर्न सक्दछु र रूपमा पनि म युवा मानिसहरु मा र गर्न सक्छन् MISINFORMATION कि तिनीहरू छन्। तपाईं कोरोनाभिरस कैच गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंलाई लाग्छ कि तपाईं एक सुपर हुनुहुन्छ हीरो, तपाई वास्तवमै हुनुहुन्न। तपाईं यो क्याच गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईं यसलाई हस्तान्तरण गर्न सक्नुहुन्छ तपाइँलाई नै खतरनाक बनाउँछ तपाईंले प्रेम गर्ने मानिसहरू। तर नयाँ यार्क शहर पार्क छ समस्या भयो। म आफ्नै समस्या देख्छु FIRSTHAND म मेयर डे ब्लासिओ र बोल्दछु स्पिकर जॉनसन, हामी आए २ 24 घण्टामा एउटा योजनाको साथ सबैको साथ सहमत छ। तिनीहरू योजनाको साथ आउँदछन्। हामी अब कार्यान्वयन गरिरहेका छौं योजना। मैले त्यो योजनामा ​​हस्ताक्षर गरे। योजना पाइलट बन्द हुनेछ स्ट्रीट्स न्यू यॉर्क शहर कारण हामीसँग नयाँ कम ट्राफिक छ यार्क सिटी, हामीसँग धेरै छ न्यू योर्क शहरमा सवारी साधनहरू। खुल्ला मार्गहरू। मानिसहरु WALK गर्न चाहन्छन्, उनीहरु चाहन्छन् बाहिर जानुहोस् र केही आकाशवाणी पाउनुहोस्। तपाइँ एक कम डेन्सन क्षेत्र चाहानुहुन्छ। त पायलट बन्द स्ट्रीटहरू कारहरू, खोल्ने मार्गहरू PEESTIANS हामी पनि एन्टेक्ट म्यान्डेटरी PLAYGROUND सामाजिक घनत्व। सायद नयाँ कन्सेप्ट। कुनै सम्पर्क सम्पर्क खेलहरू A मा छैन GROUND खेल्नुहोस्। उदाहरणको लागि कुनै बास्केटबल छैन। तपाइँ यो गर्न सक्नुहुन्न। हामी जनतालाई त्यो गर्न आग्रह गर्दैछौं अनियमित आधारमा। यदि यसका साथ मान्यता छैन भने त्यो, हामी त्यसो गर्छौं म्यान्डेटरी र हामी वास्तवमै गर्नेछौं प्लेग्राउन्डहरू बन्द गर्नुहोस्। हामी त्यो गर्न चाहँदैनौं प्ले ग्रुन्डहरू जानको लागि ठाउँ हो निस्किनुहोस् र एयर खोल्नुहोस्, तर तपाईं सामाजिक घनत्व अभ्यास गर्न छ एक प्लेग्रोन्डमा पनि। र फेरि, यो स्वयम् हो। मेयर आईटी बनाउन गइरहेको छ स्पष्ट गर्नुहोस् कि यो महत्वपूर्ण हो शहरका मानिसहरु यदि यो छैन भने, हामी गर्नेछौं वास्तवमा खेल को तल बन्द गर्नुहोस् मैदान। म त्यो गर्न चाहन्न। तर हामी यो रिडु गर्न आवश्यक छ प्रभाव र त्यो फैलियो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको के हो। यो धेरै चाखलाग्दो छ। साक्षात्कार सिफारिशको रूपमा त्यो घनत्व नियन्त्रण उपायहरू काम गरिरहेका हुन सक्छन्। र फेरि, हामी यो गरिरहेका छौं प्रोजेक्टहरूबाट। तर हेर्नुहोस् यस कारण यो छ चाखलाग्दो। यो विगतको आइतबार, परियोजना त्यो अस्पतालमा थियो हरेक दुई दिन डबल गर्नुहोस्। ल? सोमबार, नम्बर सिफारिश त्यो अस्पताल थियो हरेक UB.4 दिनहरु डब्लिन गर्नुहोस्। TUESDAY मा, परियोजनाहरु सिफारिश गरियो कि अस्पतालहरु डब्लिER्ग थिए सबै 7.7 दिन अब, यो धेरै राम्रो गर्न को लागी हो सत्य हुनुहोस्। तर सिद्धान्त दिनुहुन्छ डेन्सिटी हामीसँग काम गर्ने छौं, यो धेरै नै फैलिन्छ, तर यदि तपाईं घनत्व कम गर्नुभयो, तपाईं सक्नुहुन्छ धेरै नै छिटो फैलनुहोस्। यी प्रोजेक्टहरू, म छु ती सबै बाउन्स हेर्नुहोस् ठाँउ र म एक ठूलो स्थान छैन कुनै एक मा स्टॉक को सौदा सबै सही सम्मान संग परियोजना सबै तथ्या C्क जारी राख्नुहोस् त्यो गरिरहेको छ। तर फेरि, यो एक सकारात्मक छ साइन इन गर्नुहोस्। र म १००% सुरक्षित छैन यो होल्डहरू वा प्राप्त छ। तर तीरहरू ती मध्ये टु .्गिन्छन् सही दिशा। र त्यो सधै राम्रो छ तीरहरू गलतमा टाउँछन् डायरेक्शन लामो मानिस भन्न को लागी यी आवश्यकताहरू, सामाजिक डिस्टन्सिING, कुनै विस्थापनहरू, हैन बेकार कामगार, हो, तिनीहरू BURDENSome हो। मार्ग द्वारा, तिनीहरू प्रभावकारी छन् र तिनीहरू आवश्यक र छन् उनले यो पोइन्टमा सिफारिश गरे तिनीहरू तल छ अस्पतालहरु। र यो सबै हो। अस्पताल कटाइलो गर्दै दर, अस्पताल भित्र आउँदैछ अस्पतालमा सबै छन् मान्छे को दर संग सम्झौता गर्न सक्नुहुन्छ भित्र आउँदैछ। उही समयमा, वृद्धि भयो अस्पतालको क्षमता, के हो उच्च बुँद? तपाईं त्यो लाइन देख्नुहुन्छ सुरु गर्दै हामी के अध्ययन गर्दैछौं, त्यो के हो त्यो झुटो को झुकाव, के हो त्यो लाइनको शीर्ष त्यो पोइन्टको हो मान्छे आउनेहरूको सबैभन्दा ठूलो संख्या अस्पताल प्रणाली भित्र यति छ हाम्रो सबैभन्दा ठूलो लोड छ एपेक्स र जब जाँदै छ हुन्छन्। फेरि, त्यो एक प्रोजेक्शन हो। फेरि, त्यसले AOVUND लाई बढावा दिन्छ। तर वर्तमान परियोजना हो त्यो २१ दिनमा हुन सक्छ। SO रैम्प अस्पतालको क्षमता माथि बनाउन - ह्यान्डल गर्न सक्षम हुन त्यो एपेक्स भोलीम। तपाईं कसरी अस्पतालमा र्याम्प गर्नुहुन्छ क्षमता? तपाइँ र्याम्प बेड, तपाइँ र्याम्प अप स्टाफ र तपाइँ र्याम्प अप उपकरण र भेन्टिलरहरू हुन् हामी जस्तो उपकरणमा समस्या धेरै समय बर्बाद गरियो। हामी कहाँ छौं? बेड्स, हामी १ 140०,००० चाहिन्छ। हामीसँग ,000 53,००० छ। त्यो अवस्थित क्षमताको हो अस्पतालहरु हामी सबै अस्पताल भन्छौं तिनीहरूको क्षमता बढाउनको लागि थियो 50०% द्वारा। मैले तिनीहरूलाई बताएँ कि A कन्फरेन्स कल इस्टर्डे। यो उनीहरूको लागि एक बोझ हो अस्पतालहरू अब तपाईंले भन्नुभएको छ क्षमता 50०% बढाउनुहोस्। तर म तपाइँलाई भनेको छु, ती यसको बारेमा धेरै सामान्य थियो र तिनीहरूले हामी जे जान्दछौ संग व्यवहार। र तिनीहरू चाँडो लाग्न ईगर थिए प्लेट गर्न। यदि तपाइँ अस्पतालमा वृद्धि गर्नुहुन्छ क्षमता 50०% द्वारा, त्यो तपाईंलाई भेटिन्छ माथि २ 27,००० बिस्तर अवस्थित, IT ले तपाईंलाई TO० सम्म लिन्छ। केहि अस्पतालहरु म एक लक्ष्य को रूप मा सोधे तपाईंको १००% द्वारा बढाउने प्रयास गर्नुहोस् क्षमता। %०% मिनीमम थियो। लक्ष्य १०० थियो। म केहि अस्पतालहरुमा विश्वास गर्छु वास्तवमै त्यो गर्न कोशिस गर्नुहोस्। र म तिनीहरूलाई प्रयास गर्न प्रोत्साहित गर्छु IT को जस्तै असह्य जस्तो गर्नुहोस् ध्वनि। तर अब समय भएको छ आक्रामक गर्नुहोस् र तपाइँ तपाइँको काम गर्नुहोस् पहिले कहिल्यै नगर। यदि उनीहरूबाट केहि गर्नुहोस्, र म केहि विश्वास गर्नुहोस्, त्यो एक थप 5,000,००० हुनेछ बेड्स, हामी 85 B,००० बिडहरू पाउँदछौं। फेमा, इन्जीनियर्सको आर्मी कर्पस, हामी जाँदा के गर्दैछौं केन्द्र हुनुहुन्छ, अधिवेशन केन्द्र, पश्चिम बेरी क्याम्पस, ढुON्गा ब्रूक क्याम्पस, हामीलाई लैजान्छ ,000 ,000,००० अमेरिकी नौसेना शिप "कम्फोर्ट," राष्ट्रपति छुट, त्यो फिर्ता गर्न १,००० बेड हुनेछ होटलहरूबाट, जुन तपाईंलाई लिन्छ ,000 ०,००० यदि हामी सबै राज्य लिन्छौं नयाँ राज्यमा छात्रावासहरू यार्क, कि हामीलाई एक हुन्छ थप 29,000 बिडहरू। हामी ११ ,000, ००० बिडहरूमा छौं। तपाईं 140 मा भर पर्दैन तपाईलाई आवाश्यक छ, तर हामीले खोजिरहेका छौं होटलहरूमा, हामी हेर्दैछौं फार्मर नूर्सिOM होम्स, कन्भर्टिंग हामीलाई बनाउन अप्ठ्यारा सुविधाहरू बिभिन्न एक धेरै, सिर्जनात्मक, कृषि, तर जीवनमा तपाईले के गर्नुभयो गर्नु पर्ने। र हामीले के गरिरहेछौ बेड क्षमता। संरक्षण उपकरण, हामी छौं संसारभरि किनमेल गर्नेहरू। हामीसँग पूर्ण टीम रहेको छ गर्दै छु। अब हामीसँग धेरै अधिकार छ संरक्षण उपकरण, प्रेम, मास्क, सबै लागि GOWNS अस्पतालहरू स्ट्याटविड ती हुन् यो संग सम्झौता। आज कुनै अस्पताल, कुनै NURSE, कुनै हैन चिकित्सकले कानुनी रूपमा म भन्न सक्छु संरक्षणात्मक उपकरण छैन। अहिले नै र यसको लागि फोरसेबल भविष्य, हामी एक छौं आपूर्ति। हामी सुरक्षित छैन ए अब देखि तीन हप्ताहरूको लागि आपूर्ति अब देखि चार हप्ता, पाँच हप्ता अबदेखि। तर हामी अहिले किनमेल गर्छौं। र यो राम्रो समाचार थियो र टीम द्वारा राम्रो काम। र फेरि हामी पसलहरू किनमेल गर्छौं थप उपकरणहरूको लागि। भेन्टिलेटरहरू, भेन्टिलियर्स, भेन्टिलेटरहरू। हामीलाई ,000०,००० चाहिन्छ। हामी अवस्थित अस्पतालमा छौं प्रणाली ,000००० वेंट लेटरहरू। यो सामान्यमा मात्र हो अस्पतालहरूको संचालन। हामीले 7,००० खरीद गरेका छौं र हामी छौं अझै किनमेल। संघीय सरकार पठाइएको छ ,000,०००। हामी स्प्लिटिंग कहाँ छन् एक वेंटलिटर दुई गर्न पर्छ चित्रहरू। ITALY IT गर्न बाध्य पारिएको थियो। म हेर्न चाहन्छु यदि हामी अध्ययन गर्न सक्दछौं र यो एक स्मार्ट स्मार्ट र एक धेरै बढी समय छ यसको साथ प्रयोग गर्दै, तर हामी छौं छिटो हेर्दै भेन्टिलेटरहरू। हामी यसको साथ काम गर्दैछौं फेडरल सरकार गर्न को लागी अधिक वेंटलिटरहरू खोज्नुहोस्। तर त्यो हाम्रो एकल महान् हो चुनौती वेंटलिटरहरू हुन्। फेरि, आईसीयू बेडहरू, वास्तवमै VentILATED BEDAUSE मतलब फेरि, यो नम्बर एक हो हामीलाई चाहिएको उपकरणको टुक्रा। तपाइँसँग बिस्तर छ, तपाइँसँग छ उपकरण, तपाईलाई स्टाफ चाहिन्छ, र तपाईले स्टाफलाई बुझ्नु पर्ने हुन्छ त्यो केहि स्टाफ प्राप्त गर्न जाँदै छ बिरामी र तिनीहरू बाहिर आउनेछन्। त्यसैले हामी काम गरिरहेका छौं सँगै एक शल्य स्वास्थ्य राख्ने केयर फोर्स। रेटरीहरूमा पछाडि जानुहोस्, पछाडि जानुहोस् NURSES र ड्याक्टर जो को हो अस्पतालमा नहुनुहोस् मेडिकल केयर ऑक्युपेशन, र सोध्नुहोस् उत्तरदायीको लागि उनीहरूलाई हस्ताक्षर गर्न DESY रिजर्भ गर्नुहोस्। भगवानले उनीहरुलाई कृपा गरुन्। ,000०,००० मानिसहरूले यसमा हस्ताक्षर गरे एक शल्य स्वास्थ्य देखभाल फोर्स। फिजिक्स, यी एक आवश्यक YOL GUESTS, NURSES, LPNs, ,000०,००० मानिसहरूले साइन अप गरे। त्यो धेरै नै हो - त्यो ठूलो छ, ठुलो कुरा। तपाईं बेड बनाउन सक्नुहुन्छ, तपाईं उपकरण भेट्टाउन सक्नुहुन्छ, तपाईं छ गर्न छ स्टाफ। र तपाइँसँग स्टाफ छ ती थप बेडहरूको लागि अब अस्पतालमा छैन प्रणाली। र तपाइँसँग स्टाफ छ जब छ अवस्थित स्टाफ आईएल हुन्छ। वा जसरी काम गर्न सक्नुहुन्न हामी जान्छौं कि घण्टा मानिसहरूलाई काम गर्न आवश्यक छ। त्यो त धेरै राम्रो छ। यो पनि धेरै आकर्षक छ। मलाई थाहा छैन कि अरू कुनै पनि यो भयो। हामी भावनात्मक बारेमा कुरा गरेका छौं तनाव छ कि यो ल्याउँछ पीपल। र मानसिक स्वास्थ्य तनाव र मानसिक स्वास्थ्य चुनौतीहरू। पक्कै पनि वास्तवमै यसबारे कुरा गरिरहेको छैन यो हामी सबै बारे मा संकलित छौं तत्काल नाजुक आवश्यकता, जीवन र तत्कालको मृत्यु स्थिति जो सही छ, तर यसलाई बेवास्ता नगर्नुहोस् भावनात्मक ट्राउमा मानिसहरू हुन् भावना र भावनात्मक स्वास्थ्य ISSUES। हामी मानसिक स्वास्थ्यको लागि सोध्छौं VOLUNTARILY गर्न पेशेवरहरू साइन इन गर्नुहोस् अनलाइन ऑनलाइन प्रदान गर्न स्वास्थ्य सेवाहरु। ,000,००० मानसिक स्वास्थ्य व्यावसायिकहरू सहमत छन् VOLUNTEER मानसिक प्रदान गर्न मानिसहरूका लागि स्वास्थ्य सेवाहरू यो आवश्यक छ। कसरी सुन्दर छ त्यो। र होटलाइन १-84444-86363-93१,, तपाईं HOTLINE कल गर्न सक्नुहुन्छ, A को साथ एक नियुक्ति योजना मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर तिनीहरूलाई कुरा गर्न पूर्ण नि: शुल्क तपाईं कस्तो महसुस गरिरहनुहुन्छ। र फेरि B,००० लाई धन्यबाद दिनुहोस् मानसिक स्वास्थ्य प्रोफेशनल्स जो यो नि: शुल्क गर्दै छन्। र म उनीहरुको सामान्य मा निश्चित छु अभ्यास तिनीहरू व्यावहारिक छन्। त्यसो भए यो एक अनौंठो कदम हो उनीहरू द्वारा। म उनीहरुमा निश्चित छु अभ्यास तिनीहरू व्यावहारिक छन्। त्यसो भए यो एक अनौंठो कदम हो उनीहरू द्वारा। म राष्ट्रपति ट्रम्पको साथ बोल्दछु धेरै समय, अन्तिम रात, म हैन उहाँलाई यो बिहानको साथ। म मान्छे बोल्दै छु सेतो घर जो हेन्डलिंग हो यी अपरेसनहरू। म भोइस संग कुरा गरें राष्ट्रपति म JARED KUSHNER संग बोल्दै छु जो एक नयाँ यॉर्कर हुनुहुन्छ, उहाँ जान्नुहुन्छ न्यूयोर्क। र ऊ सेतोमा काम गर्दैछ घर र उहाँ हुनुहुन्छ सबैलाई अनौंठो सहयोगी यी परिस्थितिहरूको। हामी केमा काम गर्दैछौं A COMON CHALLENGE। कुनै एक जना यी वेंटलरहरू र कुनै एक पछाडि एटिपेटेड ए साइट जहाँ तपाइँ चाहानुहुन्छ यो भेन्टिल्टर्स को संख्या सार्वजनिक स्वास्थ्य संग सम्झौता इमरजेन्सीहरू। त्यसोभए हामीले सबै खरीद गर्यौं कि खरीद गर्न सकिन्छ। हामी अहिले सिट्युसनमा छौं कि हामी स्वीकार गर्न कोशिस गर्दैछौं यी वेंटलिटरहरूको उत्पादन र भेन्टिलेटर एक कम्प्लेकेट छ उपकरणको टुक्रा। राष्ट्रपति र उनको टीम म DPA WELL प्रयोग गर्दैछन् भन्ने लाग्छ कारण यो सामान्य छ A - IT एक बेफिक्री उपकरण छ जब डिलि। निजी कम्पनीहरूको साथ, सही? हामीलाई तपाईको सहयोग चाहिन्छ। हामी तपाईंको सहयोगको लागि मांग गर्न सक्छौं। वा तपाइँ मद्दत गर्न सहमत हुनुहुन्छ र हामी तपाईंलाई थाँहा गर्न आवश्यक छ र उत्पादन बढाउनुहोस्। त्यो संग पनि, त्यहाँ एक र्याम्प छ अप्ट टाईम कम्पनीको लागि पुट्नका लागि सँगै आपूर्ति श्रृंखला, PUT सँगै वर्कफोरस, र पाउनुहोस् यी चीजहरू माथि र भागिरहेका छन्। त्यसो भए फोर्ड तपाईले सुन्नुहुनेछ सहायता, सामान्य मोटर्सले मद्दत गर्दछ। समस्या हाम्रो समय रेखा छ छोटो, हामी एक हेरे छौं एपेक्स २१ दिन त्यो क्रममा। भेन्टेलरहरू र यी प्राप्त गर्न व्यवसाय कन्सोर्टियम पुट सँगै, आपूर्ति श्रृंखला, डेलिभरीहरू, र्याम्पेड अप छ एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिफिक्ट टास्क। र यो हाम्रो केहि हो टीम यसका साथ काम गरिरहेको छ सेतो घर टीम र म चाहन्छु राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद दिनुहोस् सहयोग र उनको टीम को लागी तिनीहरूको सहयोग। हामी धेरै रचनात्मक गर्दैछौं, हामी देशहरूमा कुरा गर्दैछौं संसारमा नयाँ को रूप मा हेर्नुहोस् कम्पनीहरु के गर्नु पर्छ उत्पादन हामी गोरे कुरा गर्दैछौं अर्को कन्सेप्टको बारेमा घर। न्यू योर्क सबैभन्दा ठूलो आवश्यक छ संख्याहरूको सर्तहरूमा। न्यू योर्क पनि सबैभन्दा छ सर्तहरूको शर्तहरू आवश्यक छ समय ठीक? हामी हाम्रो अपੈਕਸको बारेमा कुरा गर्छौं, हामी कुराकानी गर्छौं यस बारे विभिन्न क्षेत्रहरू आसपास देश भइरहेको छ बिभिन्न कुराहरु हामी केही तरिकाहरूमा छौं। हाम्रो केस नम्बर पहिले भयो। हाम्रो यात्रा पहिलो छ। लामो शट द्वारा। विभिन्न क्षेत्रहरू हुनेछन् विभिन्न समय मा तिनीहरूको यात्रा। मैले राष्ट्रपतिलाई के भने र उसको टीम थियो, हेर, र्याथेर भन्दै हामी प्रदान गर्छौं सम्पूर्ण देशका लागि उपकरण एक पटकमा, अब हामीसँग कुरा गरौं क्रिटिकल चाहिएको ठेगाना त्यो हट स्पट, एक पटक तातो स्पट टर्न्स, तपाईंले राख्नुभएको कारण एपेक्स र त्यसपछि तपाईं एक यात्रा छ, र यात्रा स्वतन्त्र छ छोटो, एक पटक तपाईंको ठेगाना जुन होट स्पट त्यो ईन्टेन्सिटीको साथ, INTENSE EQUIPMENT, INTENSE PERSONNEL, तब शिफ्ट अर्को हट स्पट। र रोलिंगको अधिक छ देश पार गर्नुहोस् एक तथ्याPL्क DepPLOYMENT, सही? म संघीय सरकारमा थिएँ HUD मा, म दर्जनौं मा काम गर्थे निराशा। तपाईं एक डिसास्टर संग सम्झौता तपाइँको अगाडि त्यो समयमा र त्यसोभए तपाईं अर्कोमा जानुहुन्छ प्रकोप। र मलाई लाग्छ कि रोलिंग DepPLOYMENT यहाँ काम गर्न र गर्न सक्नुहुन्छ न्यू योर्कको सुरुवातमा, निर्भरता हामी १००% हुन्छौं सहयोगी हामीलाई सम्पूर्णबाट मद्दत चाहिन्छ अब देशको अधिकार। हामीबाट स्रोतहरू चाहिन्छ पूरा देश अहिले नै। र हाम्रो अप्क्स पहिलो हो र हाम्रो संख्या सबैभन्दा माथि छ। तर एपेक्स उच्च पोइन्ट हुनेछ क्रममा देश पार गर्नुहोस्। त्यसैले मैले सेतो हाउसलाई भनेँ हामीलाई पठाउनुहोस् उपकरण आवश्यक छ, हामीलाई व्यक्तित्व पठाउनुहोस्। जसरी हामी हाम्रो विगत पाउँदछौं क्रिटिकल पल, हामी गर्दछौं पुनर्वस्तु कि उपकरण र अर्को होट स्पटमा व्यक्ति। र म व्यक्तिगत ग्यारेन्टी दिनेछु आईटी र व्यक्तिगत व्यवस्थापन आईटी। यदि तपाईं हामीलाई १ US,००० पठाउनुहोस् भेन्टिलियर्स र हाम्रो पछाडि हराउनुहोस् एन्जलहरू १G,००० को आवश्यकता छ भेन्टिलेटरहरू, हामी लिन सक्छौं यहाँबाट उपकरण, हामी लिन सक्छौं यहाँबाट व्यक्ति, हामी यहाँबाट पाठ लिन सक्नुहुन्छ, हामी पहिले जान्छौं, हामी ती चीजहरू सिक्न सक्छौं त्यो ईश्वरको शिक्षा हो। कारण हामी हुन गइरहेका छौं पहिलो कुरा बाट। र म व्यक्तिगत ग्यारेन्टी दिन्छु हामी त्यो उपकरण ल्याउँछौं, हामी त्यो व्यक्ति ल्याउनेछ, हामी चाहन्छौं प्राविधिक सहयोग ल्याउनुहोस् अर्को अर्को हट स्पटमा। मैले राष्ट्रपतिलाई भनेँ, म हुनेछु अर्को होटलमा जानको लागि भाग हाम्रो टीम संग स्पट। हामी सहयोगको लागि देशलाई सोधिरहेका छौं अमेरिका हामी फेरी फर्कनेछौं। र हामी सबै यो सँगै छौं। र हामी तिनीहरूको सहयोगका लागि सोधिरहेका छौं र तिनीहरूको कन्सेडरेशन र हामी DIVIDENDS सँग यसको भुक्तानी गर्नेछ। सेनेट पनि विचारशील छ A TR २ ट्रिलियन बिल जो हो कोट / अनकुट विश्वासको लागि व्यवसायहरू, व्यक्तिगत र सरकारहरू। यो वास्तवमै लागि भयानक हुन सक्छ न्यू योर्क राज्य। $ २ ट्रिलियन बिल, के गर्छ आईटी यो न्यू योर्क राज्य को लागी हो सरकार? आईटीको मतलब $ 8.8 बिलियन। $ 8.8 बिलियन ध्वनि धेरै मन पर्छ पैसाको। बजट निर्देशक तपाईं कुरा गर्न सक्नुहुन्छ संख्याहरू मार्फत। तर हामी राजस्वमा हेर्दैछौं $ IL बिलियनको शर्टफल, OR १० बिलियन, $ १ B बिलियन। यो प्रतिक्रिया यो भाइरस छ सम्भवतः अमेरिकाको लागत। १ बिलियन, यो सम्भवतः खर्च हुनेछ अमेरिकी सतर्क बिल बिल डलरहरू कहिले हामी सम्पन्न भयौं। न्यू योर्क शहर केवल $ १. G प्राप्त गर्दछ यस प्याकेजबाट बिलियन। त्यो बुकेट मा एक ड्रप छ। म हाम्रो घर सम्झौताको कुरा गर्छु, क DE्ग्रेसनल डेलीगेशन, यो बिहान मैले तिनीहरूलाई यो गर्न नहुने भनेको थिएँ IT तपाइँ जान्नुहुन्छ, म बुझ्दछु थियरी र रिपब्लिकन सेनेट गर्नुहोस् सिद्धान्त, तर हामीलाई घर चाहिन्छ समायोजन गर्नुहोस्। र त्यो घर बिल गर्नुहोस् ओभर, न्यू योर्क राज्य प्राप्त भयो $ १। बिलियन सेनेट बिलमा, हामी $ 8.ET प्राप्त गर्छौं बिलियन र, स्वागत छ, तपाईं मात्र - ठूलो खर्च गर्दै। हामी एक ठूलो खर्च गर्ने स्थिति होइनौं। म हरेक वर्ष कर कटौती गर्छु। मसँग सबैभन्दा कम ग्रोथ रेट छ आधुनिक मा राज्य बजेट राजनीतिक ईतिहास। ल? हामी फ्रिगल छौं र हामी छौं EFFICIENT। म तिमीलाई बताउँदै छु, ती संख्याहरू काम नगर्नुहोस् र मैले घर भनेको सदस्य जो हामीलाई वास्तवमै चाहिन्छ तिनीहरूको सहयोग। संख्याहरूको सर्तहरूमा, कुल परिक्षण, हामी १० 10,००० सम्ममा छौँ पीपल। नयाँ परीक्षणहरू हामी १२,००० सम्ममा छौं। YESTERDAY को रूपमा, को बारे मा 28% सबै परीक्षण राष्ट्रभाषण गरिएको छ नयाँ राज्य द्वारा प्रस्तुत यार्क। न्यूयार्कको राज्य अधिक गर्दैछ मा कुनै पनि राज्य परीक्षण गर्दै संयुक्तराज्य अमेरिका। र म टीमको धेरै प्रोड हुँ हामी कसरी परिचालन गर्छौं र यो परीक्षण पाउनुहोस् र भाग्नु मानिसहरू सोध्छन् कसरी परीक्षण गर्दछ काम राज्य क्यान मा कुनै पनि अस्पताल PERFORM TESTING। तपाईं अस्पताल भित्र हिंड्न सक्नुहुन्छ BUFFALO, न्यू यार्क यदि तपाईंले देखाउनुभयो लक्षण र भेट्नुहोस् प्रोटोकोल, तपाइँ परीक्षण गर्न सक्नुहुन्छ। रणनीतिक, हामी परीक्षण परीक्षण गर्छौं सबैभन्दा बढी क्षेत्रहरूमा, कहाँ हामी ड्राइभ थ्रस र सेट ET CETERA। किन? हामी सकारात्मक हिन्टनिंग गर्दै छौं। हामी सकारात्मक छौं त्यसैले हामी तिनीहरूलाई अलग गर्न र हटाउन सक्नुहुन्छ फिंजाउनु। तपाईं प्राप्त गर्न को लागी अधिक मन पर्छ एक उच्च सकारात्मक मा सकारात्मक क्षेत्र, सही? ब्रोंक्समा एउटा ड्राइभ-थ्रु सेट गर्नुहोस् VERSUS एक ड्राइभ-थरू मा चौटाउका काउन्टी, तपाइँ पाउनुहुनेछ ब्रोंक्समा अधिक सम्भावितहरू। र हामी के चाहन्छौं। तर यहाँ पनी कुनै पनि राज्य, यदि तपाईं लक्षण हुनुहुन्छ, तपाईं चिन्ता लिनुहोस्, तपाईं भित्र जान सक्नुहुन्छ कुनै पनि अस्पताल र त्यो अस्पताल एक परीक्षण प्रदर्शन गर्न सक्नुहुन्छ। पोजिटिभ केसहरूको संख्या, हामी हौं TO०,००० सम्म। नयाँ केस संख्या, .,०००। फेरि तपाईले नम्बरहरू देख्नु भयो। १,000,००० - SORRY, १,000,००० न्यू योर्क CITY ,000,००० WESTCHESTER, ,000,००० IN नासाउ काउन्टी। सापेक्ष पश्चिमी हामी छौं नाटकीय रूपमा के थियो एक हो व्यावहारिक वृद्धि। त्यसोभए राम्रो समाचार साइडमा फेरि, तपाईं दर कम गर्न सक्नुहुन्छ जानकारी। हो। तिमीलाई कसरी थाँहा छ? हामी केमा थियौं हेर्नुहोस् WESTCHESTER। त्यो होट्स्ट क्लस्टर थियो अमेरिकाको संयुक्त राज्य अमेरिका। हामी स्कूलहरू बन्द गर्यौं, हामी बन्द भयौं जम्मा। हामी परीक्षणमा भेट्टायौं। र हामी नाटक मात्र सुस्त छौं वृद्धि NASSAU काउन्टी ,000,००० छ। तिनीहरू पछाडि सापेक्षिक छन् WESTCHESTER। शून्य जस्तै जब WESTCHESTER सुरु भयो। त्यसो भए हामी यसलाई काट्न सक्छौं र हामी छौँ स्लाउड आईटी। फेरि, तपाईं यो फैलिएको देख्नुहुन्छ हामीले भनिएको राज्यलाई पार गर्नुहोस् आईटी चाहिन्छ। हालको संख्या, ,000०,००० परीक्षित सकारात्मक पोजिटिभ परीक्षण गर्नेहरू मध्ये १२% HOSPITALIZED छन्। 3% सकारात्मक आईसीयू मा छन्। ल? यो फेरि समय छ। म चिन्तित छु, म निर्भर छु, के यसको अर्थ के हो? ,000०,००० परीक्षण गरिएको सकारात्मक। १२% अस्पतालमा छन्। %% आईसीयू मा छन्। यदि तपाईं यी 3% मा हेर्नुहुन्छ, तिनीहरू प्री-डोमिनटली सेनियर हो सिटीजनहरू, मानिसहरूसँग अन्वेषण ILLNESSES, मान्छेहरू EMPHYSEMA संग, मानिसहरू संग संकुचित इम्मुन प्रणाली। त्यो सबै के हो यो बारे। सबै नोइस, सबै ऊर्जा, यो लगभग%% हो। लामो सास लेउ। अब, त्यो%%, त्यो मेरो आमा हो, त्यो तपाईंको आमा हो, त्यो हो तपाईंको बहिनी, हामी यिनीहरू हौं माया गर्नुहोस्, यी हाम्रो ग्रान्डपोर्टहरू हुन् र हामी त्यो सबै गर्छौं हामी सबैलाई जोगाउन सक्नुहुन्छ उनीहरु। र म जनतालाई दिन्छु नयाँ योर्कको मेरो शब्दको राज्य हामी यो गर्दैछौं। तर हामी 3% को बारेमा कुरा गर्दैछौं मानिस जसले सकारात्मक परीक्षण गरे हामी को बारे मा काम गर्दै छौं। धेरै प्रभावित तथ्या .्कहरू, हामी हौं ,000०,००० अर्को नजिकको राज्य नयाँ जर्सी हो AT3क्यालिफोर्निया २। यो वास्तवमै भयानक हो बिभिन्न र यो के म संगठित छ जो कोही पनि सूचीबद्ध हुनेछ। हामीसँग दस पटक समस्याको रूपमा छ नयाँ जर्सी। तपाईं हामीलाई क्यालिफोर्निया गर्न सक्नुहुन्छ के सर्तहरु मा अधिक छ लोकप्रिय हामीसँग १IM पटक समस्या छ। अब, तपाइँ आफैलाई सोध्नु छ किन किन न्यू योर्क यस्तो छ A उच्च संख्या। र पूर्ण रूपमा फेरि, हामी यसको अर्थ के हो भनेर बुझ्नुहोस्। तर नयाँ योर्क किन गर्छ एक उच्च संख्या? र यो मेरो व्यक्तिगत राय हो। म निश्चित बनाउन चाहन्छु कि म व्यक्तिगतबाट तथ्यहरू अलग गर्नुहोस् ओपिनियन। तथ्यहरू जुन म तपाईंलाई दिन्छु मसँग असल तथ्यहरू छन् र फेरी पनि डेटा दिन मा परिवर्तन हुन्छ। तर म तपाईंलाई वास्तवमै के दिन्छु दिन आधारमा एक दिन छ। व्यक्तिगत राय, किन नयाँ गर्छ यार्क धेरै धेरै केसहरू छन् अरू कुनै राज्य? यो कसरी हुन सक्छ? तपाईं १ 15 पटकको संख्या हुनुहुन्छ क्यालिफोर्निया। IEEEEEEEEE, MEAN, वास्तवमै BREATHTAKING छ जब तपाईं यसको बारेमा सोच्नुहुन्छ। T० पटकको साथ मासाचुसेट्स संख्याहरूको संख्या। किन यो प्रश्न हो मानिसहरू मलाई सोध्छन्। दुई जवाफ। उत्तर एकले हामीलाई स्वागत छ ग्लोबबाट मानिसहरू। हामी यहाँ आएका मानिसहरू छौं, हामी यहाँ आएका मानिसहरू जो छन् चीन, यहाँबाट आएका इटालीले, सबै जना यहाँबाट आएका को हुन् ग्लोब घुमाउनुहोस्। हामी अन्तर्राष्ट्रिय यात्रीहरू हौं चीन मा को थिए र को थिए इटाली र को कोरिया मा। र कसले यहाँ आयो। र मसँग कुनै शUB्का छैन भाइरस यहाँ धेरै अगाडि थियो हामीलाई थाहा छ र मसँग कुनै शUB्का छैन भाइरस यता धेरै पहिले थिए यो कुनै पनि अर्को राज्यमा थियो। ती मानिसहरू यहाँ आउनुहोस् FIRST त्यो पहिलो जवाफ हो। दोस्रो उत्तर हामी नै हो बन्द छन्। किनभने हामी बन्द छौं। हामी भाइरसको बारेमा कुरा गर्छौं र कसरी आईटी डेन्सेज क्षेत्रमा ट्रान्सफर गर्दछ। यो हामीसँगै नै हो बन्द गर्नुहोस् हामी एकसँग बाँच्नुहोस् अर्को। हामी एक नजिक छौं अर्को ठाउँमा। हामी नजिक रहन्छौं समुदाय। हामी एक नजिक छौं बस मा अर्को। हामी एक अर्काको नजिक छौं रेस्टुरेन्ट। हामी एक अर्काको नजिक छौं मूवी थियेटर। र हामीसँग सबैभन्दा धेरै छ बन्द वातावरणहरू COUNTRY र यो भाइरस किन हो संचार गरीएको तरिका। हाम्रो नजिक हामीलाई बनाउँछ VULNERABLE हाम्रो नजिक हामीलाई बनाउँछ VULNERABLE त्यो खाली ठाउँ हामीलाई बनाउँछ VULNERABLE तर यो सत्य हो कि तपाईंको हो सबै भन्दा राम्रो कमजोरी पनि तपाईको हो सबैभन्दा ठूलो शक्ति। र हाम्रो नजिक के हुन्छ हामी को हौं? त्यो के हो न्यू योर्क। हाम्रो नजिक हामीलाई के बनाउँछ विशेष हाम्रो पहुँच, हाम्रो खुलापन, छ हामीलाई विशेष बनाउँछ। आईटीले हामीलाई कस्तो महसुस गर्दछ अर्कोमा जडित। आईटीले हामीलाई के स्वीकार गर्दछ एक अर्को। यो बन्द छ कि बनाउँछ हामी मानिसहरु मानव मानिसहरु हौं। समापन त्यो नयाँ काम हो मानवता जुन मलाई लाग्छ अब ELSE। क्लोसेन्स भनेको के हो हाम्रो समुदायको SENSE। र त्यहाँ एक सज्जन मानिस हो जो म मार्गनिर्देशनको लागि अझै हेर्नुहोस् र नेतृत्व र प्रेरणा। ऊ अरू कुनै ठाउँमा छैन। तिम्रो लागि। ऊ यहाँ छ मेरो लागि। तर उनले भने कि उसले अरू कुरा बढावा दिन्छ र अधिक सुन्दर भन्दा धेरै अरू मानिसहरू पनि छन्। र उनले भनेका एउटा कुरा त्यो यति धेरै को लागी धन्यवाद छ आज, हामी एक एकल मा विश्वास गर्छौं फन्डमेन्टल आईडिया त्यो वर्णन गर्दछ सबैभन्दा उत्तम पाठ्य पुस्तकहरू भन्दा राम्रो कुनै पनि स्पिच जुन म लेख्न सक्थें एक राम्रो सरकार के गर्नुपर्छ BE परिवारको विचार, म्यूच्युलिटी, लाभ र साझा को साझा सबै को राम्रो लागि BURDENS। एक अर्को पेन महसुस। एक अर्काको आशीर्वाद साझेदारी गर्दै। REASONABLY, HONESTLY, FAIRLY रेस वा सेक्समा सम्मान बिना वा भूगोल वा राजनीतिक AFFILIATION। त्यो नयाँ काम हो। आईटी त्यो बन्द छ, त्यो परिवारको समुदाय, समुदाय को। त्यो नयाँ न्यूयोर्कले के बनाउँदछ यार्क। र त्यो हामीलाई के बनाउँछ यहाँ VULNERABLE। तर यो पनि त्यस्तै हो कि क्लोसेन्स र त्यो कनेक्शन र त्यो मानवता र त्यो साझा गर्ने हाम्रो सबैभन्दा ठूलो शक्ति हो। र त्यो के हुन गइरहेको छ दिनको अन्त्यमा OVERCOME। म तपाईंलाई प्रमिस गर्छु। म कसरी नयाँ यर्कर्सहरू छन् भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ जवाफ दिँदै। म कसरी नयाँ यार्कर्स छन् हेर्न सक्नुहुन्छ एक अर्को व्यवहार गर्दै। म ,000,००० मानसिक स्वास्थ्य देख्छु भोलन्टर्स। म 40०,००० स्वास्थ्य हेरचाह देख्छु मजदुरहरू स्ट्यापि UP अप। मलाई विक्रेताहरु कलिंग साइन इन गर्नुहोस् म मद्दत गर्न सक्छु भन्न। त्यो नयाँ काम हो। त्यो नयाँ काम हो। र त्यो मेरो साथी हो IN-DEFEATABLE। र म केही तरिकामा खुशी छु हामी यस अवस्थाको साथ पहिलो छौं हामी ओभरकोम गर्नेछौं। र हामी अर्को देखाउने छौं समुदायहरू यस देशलाई पार गर्नुहोस् यो कसरी गर्ने। हामी तिनीहरूको लागि त्यहाँ हुनेछौं। हामी उनीहरूको लागि हामी त्यहाँ हुन चाहन्छौं। र हामी प्रत्येकको लागि त्यस्तै हुनेछौं अरू जस्तो हामी सधै हुन्छौं। कुनै प्रश्न? >> राज्यले कसले निर्णय गर्छ प्राथमिकता हुन्छ जब यो आउँछ वेंटलिटरहरू? >> हामीसँग कुनै एन्टिसेपिकेसन छैन भेन्ट्रीलाई प्राथमिकतामा राख्दै USAGE। हाम्रो लक्ष्य एक भेन्टिल्टर छ जो कोहीलाई आवश्यक छ। >> तपाईंले हामीलाई देखाउनुभयो कि नम्बर देखाउनुहोस् कि तपाईं अनुकूल हुनुहुन्छ १ 15,००० मा र तपाइँ तपाइँलाई मूल्याAT्कन गर्नुहुन्छ ,000०,००० को आवश्यकता छ। कति NITTY-GRITTY प्रश्न, यी वेंटलरहरू कहाँ छन् फेमा जाँदैछु। तपाईं कुनै पनि कमेन्ट प्राप्त गर्नुभयो सेतो घर उनीहरूले गर्नेछन् SE००० भन्दा बढि पठाउनुहोस् उनीहरूले पहिले नै कमेटी दिएका छन्? र के पुग्न योजना छ? त्यो नम्बर जसरी तपाईं नै हुनुहुन्छ बढाइएको अस्पताल बेडहरू? >> त्यो राम्रो प्रश्न हो। पहिलो हामी भेन्टिएटरहरु हौं हामी भित्र पुग्छौं स्टकपाईल र हामी जवाफ दिन्छौं हामीलाई आवश्यक छ त्यस्तै स्टकपाइल। लिटरली नै आवश्यकता छ आधार, सही? यदि एक अस्पतालमा कल हुन्छ र हामी भन्छौं हामी बढी गर्छौं, हामी छौं जवाफ दिनको लागि स्थितिमा हुनुहोस्। बेडको वृद्धि छ हाम्रो नियन्त्रण संग, ठीक? यस राज्यमा खाटहरू छन्। तिनीहरू अस्पतालमा बेडहरू छैनन् तपाइँ कसरी फिगर गर्न सक्नुहुन्छ अस्पताल बेडहरूमा उनीहरूलाई सहयोग गर्नुहोस् र तपाइँ कसरी फिगर गर्न सक्नुहुन्छ तिनीहरुमा पहुँच प्राप्त गर्न, तर हामी बेडहरू छन्। त्यसोभए यो उपस्कर हो अपरेसनल चुनौती, कसरी गर्नुहोस् तपाईं एक DORM रूम भित्र A अस्पताल बेड। हामी कसरी अस्पताल बनाउन सक्छौं? जाभिस केन्द्र। भेन्टेलरहरू फरक छन्। हामी उनीहरूसँग छैनौं। संघीय सरकारले गर्दैन उनीहरूसँग गर्नुहोस्। कुनै एक स्टकपाइल छ यी। संघीय सरकार छ हामीले उनीहरूलाई त्यहि तरीकाले पाउँदछौं तिनीहरूलाई प्राप्त गर्नका लागि छ। म सेतो हाउसको साथ काम गर्दैछु एक्वाइरको सिर्जनात्मक मार्गहरूमा उनीहरु, र्याम्पमा कम्पनीहरु पाउने UP, GETTING COMPANIES TO अन्य मशीनहरू पुनःप्रदर्शन गर्नुहोस्, यो रोलिंग DepPLOYMENT मेथोडोलोजी, तर तिनीहरूको कुनै पनि छैन। त्यहाँ कुनै मेडिकल स्टॉक छैन वाशिंगटन त्यो जादूगर हुन सक्छ तिनीहरूलाई प्रकट गर्नुहोस्। >> २०१ 2015 मा एउटा रिपोर्ट थियो जहाँ राज्य सिफारिश वा A टास्क फोर्स सिफारिश नयाँ नयाँ यार्क यो बढाउनु पर्छ स्टकपाइल। कुनै कारण त्यो थिएन DONE? >> जिमी, यो सही छैन र तपाइँ यो जान्नुहुन्छ। IT मा तथ्य परीक्षकहरू पढ्नुहोस्। त्यहाँ एक सल्लाहकार समिति थियो जीवन र कानून भनेको भनेको थियो २०१ 2015 मा एक चार्ट जुन तपाइँले भन्नुभयो १ 18 १18 स्पानिश फ्लु थियो प्यान्डिक, तपाइँलाई आवश्यक छ X नम्बर वेंटलिटरहरूको। संयुक्त राज्यमा कुनै राज्य छैन तथ्या .्कहरू कि VENTILAORS स्पानिश फ्लु महामारीको लागि। संघीय सरकार थिएन १ 18 १। को लागि भेन्टिल्टरहरू किन्नुहोस् स्पानिश फ्लु महामारी। विश्व बगैंचामा कुनै पनि छैन A को लागि तयारीमा भेन्टिलेटरहरू १ 18 १। स्पानिश फ्लो प्यान्डिक। >> तपाईको केस संख्या रिपोर्टहरू छन्, कति छ पुन: समाधान भयो? महिलाको उदाहरणका लागि इरानबाट, उनी अब सफा छ र के तपाईं अझै रिपोर्टि C केसहरू हुनुहुन्छ सायद उनीहरूले समाधान गरे? >> छोटो उत्तर हो हो। के तपाईंलाई थाहा छ, DR जकर, द संख्या कसले समाधान भयो? >> हामी अवरोधहरू र शिकार हौं बाँचेकाहरूबाट अस्पताल र ती व्यक्तिहरु समाधान गरिएको छ र त्यहाँ धेरै छन् कहिले पनि कहिले चाहिँ अन्य व्यक्तिहरू अस्पताल र हामी आउँछन् तपाइँलाई सटीक लिन प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ त्यसमा नम्बर >> तर तपाईं परिवर्तन गर्दै हुनुहुन्छ क्रिटेरिया र काउन्टी हामीलाई बताउँछ यदि नियमहरू सफा छन् भने, तिनीहरूले परिवर्तन गरेका छन् - >> ठीक। >> तपाईं के बारेमा कुरा गर्न सक्नुहुन्छ पछाडि? >> ठीक छ, हामी सीडीसीको अनुसरण गर्दैछौं दिशानिर्देश र सिफारिसहरू सात दिन पछि, यदि तपाईं सकारात्मक र सात पछि सकारात्मक र जस्तो हुनु पर्ने दिनहरू तपाई 72२ भन्दा बढि हुनुहुन्छ प्रतीकहरू बिना HOURS, तब तपाईं गृहमा पछाडि जान सक्नुहुन्छ। >> र यो उत्तम डाटा हो, ल? त्यो यूहन्ना हप्किन्स हो। यो हरेक मामला चीन हो।5435,००० 19,000 मृत्यु र फेरि, र म तपाईं DOLLARS गर्न सक्नुहुन्छ डोनट्स, तपाईलाई यस्तै लाग्छ १ ,000,०००, सेनियर नागरिकहरू, मिश्रित इम्मुन प्रणाली, ईटी CETERA। सिफारिसहरू, १०,०००। ठीक? राउली २%%। END००,००० पेन्ड गर्दै। तर हो, सिफारिसहरू हुन् सिफारिसहरू। तपाईं यो पाउनुहुन्छ - मानिसहरू म जान्दछु, तिनीहरू दुई हप्ताको लागि गृहमा रहन्छन्, र ती नकारात्मक छन्। तपाईं दुई मा नकारात्मक परीक्षण गर्न सक्नुहुन्छ हप्ता, तीन हप्तामा, तपाईं सक्नुहुन्छ एक हप्ता पछि नकारात्मक परीक्षण गर्नुहोस् तपाईंसँग यो छ। त्यो भस्ट हुन गइरहेको छ मानिसहरुको बढी संख्या। सबैभन्दा ठूलो नम्बर जब यो छ सम्पन्न भयो र हामी वास्तवमै पछाडि जान सक्छौं र परीक्षण, सबैभन्दा ठूलो नम्बर हो मान्छे हुन जो यो थियो डब्ल्यूएचओ को समाधान को जो उनलाई थाहा छैन यो थियो। >> हामी अधिक आईसीयू बिडहरू सिर्जना गर्न सक्दछौं घरमा वेंटलिटरहरूसँग। त्यसो भए हामीसँग १ 14,००० वेंटलिटरहरू छन्। यदि हामी आज गर्न चाहन्छौं भने हामी सक्दछौं यदि १ V,००० भाँडो गरिएको बिडहरू बनाउनुहोस् हामी फेरि बढ्दै गयौं क्षमता, CORRECT? >> सही। त्यो शर्त आईसीयू बेडहरूमा छ <font color="#FF0000"><u>F $ !, dOI LIVING RIGHT</u> </font> अब बिभिन्न छ। A को साथ एक रिकभरि कोठा भेन्टिलेटर एक आईसीयू बेड छ। ठीक त्यस्तै संख्याहरू तर हामीसँग ती जानकारी हुन् स्वागत छ। >> राज्य मात्र छ हामी संग योजना बनाउन छ NUMBER? <u>१.२ लाख जोड्नुहोस्</u> स्वास्थ्य देखभाल कामदारहरु आउन न्यू योर्क राज्य र तपाइँ तपाइँ देख्नुहुनेछ यी संख्या मध्ये धेरै प्रस्तुत आज विस्तार रूपमा विशेष रूपमा कलहरू बाहिर गइरहेका छन्। यो राज्यमा बस छैन। हामी पनि बाहिर स्टेट को लागी सोधे RETIREES र स्वास्थ्य देखभाल थियो कामदार र तिनीहरूको लागी व्यवस्था यस क्षेत्रमा आउन। >> त्यहाँ प्रतिस्पर्धा क्षेत्रहरू थिए। >> पजी पछाडिपट्टि मात्र प्रश्न >> के तपाईं रिपोर्टहरू हेर्दै हुनुहुन्छ पहिले नै ती प्रतिवेदन गर्दै छ? >> म ती संख्याहरूमा प्रतिक्रिया गर्दै छु त्यो हामीसँग छ। र साथ आईसीयू बेडको संख्या भेन्टिलेटरहरू। त्यो एक नम्बर यदि तपाइँ भेन्टिलरहरू हामी ल्याउनुहुन्छ हातमा छन् र ती जोड्नुहोस् बेडहरू जुन नम्बर जान्छ। हामी त्यसलाई सक्रिय पार्न सक्छौं। >> र स्टक पाइप। यहाँ स्टक गर्नुहोस्। त्यहाँ बहु मल्टि पाइल्सहरू हामी के गयौं। हामीसँग मल्टिपल स्टॉकहरू छन्। हामीसँग बहुमा राखिएको थियो स्टक पाइल्स। हामी शहर जान्छौं। हामीसँग स्टक पाइप लामो छ ISland.íp ($ oH # & W ■) र अल्बानी मा स्टक पाइप र मेरो आधारमा स्टक पाइप। >> बाहिर रोलिंग। >> हामीसँग आईसीयू थियो। हामीसँग भेन्टिलरहरू थिए स्टक पाइल्स। हामी उनीहरूलाई भेट्दैनौं अस्पताल। हामी एक अस्पताल कल गरिएको छैन मलाई भन्नुहोस् कि मैले वेंटिल्ट आवश्यक छ BED >> प्रत्यायोजित हुँदै। तिनीहरू डेपीलोइ गर्दै छन् फ्रन्ट लाइनहरु। <font color="#FF0000"><u>■ भागहरू</u> </font> अस्पताल। >> तपाईं मलाई सुधार गर्न सक्नुहुन्छ। म विश्वास गर्दिन उनीहरू जाँदैछन् DepPLOYED YET। र तिनीहरूले दुई उद्देश्यहरू खोज्छन्। तपाईलाई नयाँ बेडहरूको लागि स्टाफ चाहिन्छ। अब तपाइँले 200 लाई गर्न लाग्नु पर्छ बेड वा तपाईं एक अस्पताल छ कि कामदारहरूको एक छोटो छोटो छ घण्टा र बिमार कारण। तर जिम, हामी विश्वास गर्दैनौं अब उद्धार परिणामहरू। >> त्यो सही छ। >> ती पदहरूमा ध्यान दिनुहोस् Regulations समावेश सहित मेडिकल मालप्यारा र नियमन। >> हामी यी ISSUES मा हेर्दै छौं जस्तो राम्रो छ। त्यहाँ केहि विचारहरू छन् हामी याद गरिएकाहरू जस्तै उठेका छौं अघिल्लो प्रेस कन्फरेन्सहरूमा। हामी हाम्रो नियम र हेर्नुपर्छ नियम र एडेप्ट अनुरुप यति हामी गर्न गइरहेका छौं त्यो ठीक छ। मसँग फोन थियो अस्पताल प्रशासकहरू। स्वास्थ्य विभाग - को स्वास्थ्य विभाग छ बहु भागहरू भाग्नको लागि संयुक्त राज्यमा उत्तम स्वास्थ्य प्रणाली अमेरिकाको तथ्या .्क। र ती विनियोजनहरू यो बनाउँछन् नियमहरू समापन गर्न सक्दछन् खर्चको मार्गमा पाउनुहोस् र सुविधा र परिचालन हामी यस मामलामा भन्यौं हामी छौं पुनः भेट्न जाँदै। विनियमन धेरै तिनीहरू स्टाफ अप गर्न सक्नुहुन्छ, तिनीहरू बढ्न सक्दछन् क्षमता, तपाईंलाई थाहा छ, तपाईंले A लाई सोध्नुभयो डुबल क्षमताको लागि अस्पताल। हामी स्पेस को सबै प्रकारको छ नियमहरू। त्यसोभए तपाईंले उनीहरूको लागि लचिलोपन आवश्यक छ <u>हामी NG81BI तिनीहरूलाई</u> के गर्नुहोस् गर्नुहोस् >> म कन्फ्युस भएको छु। यदि मलाई न्यू योर्कको साथ काम गर्न आवश्यक छ भने शहर तर रिसाइरहरू नयाँ छन् यार्क सिटी। >> तपाईं एक बिन्दु हुन सक्नुहुन्छ। >> न्यू योर्क शहर पहिले नै छ तिनीहरूको आफ्नैमा गर्दै। हामी न्यू योर्क शहर 77 77 मा बोलेका छौं एक दिन टाइम्स >>। 78। >> होइन। >> म सक्छु। तपाइँ एक कONG्ग्रेस हुन आवश्यक छ PERSON। तपाइँले सेन्टर हुन आवश्यक छ, मँ छु उनीहरूको साथ कुराकानी गरियो। म वाशिंगटनलाई बुझ्दछु BUAAUCRACY। म त्यहाँ थिए। तर मैले पास हुँदा बिलहरू राखें सचिव। मलाई थाहा छ कती गाह्रो छ तर म पनि कसरी थाहा पाउँदछौ कसरी स्ट्याकहरू छन् यहाँ तपाईं हराएको मा हेर्नुहोस् अन्वेषण गर्नुहोस्, तपाईलाई के मान्छे भयो मेरो बारेमा कुरा गर्दै। तपाईं कसरी राज्य बजट गर्नुहुन्छ राजस्वमा नाटक हराउनेसँग। ऊ भन्दै थियो फेडरल सरकार जाँदै छ एउटा उत्तेजक प्याकेजलाई पास गर्नुहोस् उद्धारहरू थप फन्डिंग राज्य सरकारहरू। ल। यहाँ प्याकेज छ। IT US $ 8. B बिल दिन्छ। होल जति IGH १$ छ बिलियन >> तपाईं कसरी एक $ १ B बिलियन प्लग गर्नुहुन्छ O.8 बिलियनसहित होल? तपाईं गर्नुहुन्न। >> तपाईं कसरी जवाफ दिनुहुन्छ मानसिकता र फिलोसफी त्यो उपचार त्यो भन्दा खराब छ DISEASE र सिफारिस द्वारा राष्ट्रपति चाहानुहुन्छ कि ऊ चाहन्छ देश द्वारा खोल्नको लागि ईस्टर? >> हेर्नुहोस्, म योको भाग विश्वास गर्दछु भाषा, ठीक? >> NOBODY यो भन्दैन अर्थव्यवस्था राख्नको लागि SUSTAINABLE बन्द भयो। >> यो सक्दो छैन। हामी पाउँदछौं। त्यो .१, .२। सबै जना सहमत छन् म मा विश्वास गर्छु यो राज्य। हामी सबै गर्न सक्छौं हामी गर्न सक्छौं एक जीवन सुरक्षित गर्न। यी भर्नरपेबल मानिसहरू थिए। तिनीहरू सोमेटाइम मर्न थियो जे होस्। त्यसो गरौं चलाउनुहोस्। म कुनै पनि अमेरिकी विश्वास गर्दिन विश्वास गर्छौं। मलाई थाहा छ नयाँ योर्कर्सलाई विश्वास छैन त्यो र सरकारको रूपमा न्यू योर्कको राज्य म स्विकार गर्न सक्छु तपाईले मलाई त्यो गर्नुहुन्न। त्यसोभए तपाईंले दुई पार्लियाल गर्नुभयो THOUGHTS। तपाईंसँग अर्थतन्त्र हुनु पर्छ चलिरहेको छ र तपाईं संरक्षण गर्न छ हरेक जीवन जुन तपाईं सक्नुहुन्छ। म विश्वास गर्दछु यो थप परिष्कृत छ रणनीति अब हामी कुराकानी गरिरहेका छौं बारेमा। मलाई लाग्दैन कि यो बिनरी हो। मलाई लाग्दैन कि तपाईं तल झार्नुहुन्छ पूर्ण आर्थिक र खुला छ पूर्ण सोसाइटी व्यवसाय को रूपमा USUAL हामी अहिले त्यो सिक्यौं जोखिम कोटिकोट। युवा मानिसहरुमा जोखिम कम छ। मानिसहरु लाई भाइरस छ र समाधान कम जोखिम। भित्रबाट ल्याईको अर्थव्यवस्था सुरू गर्नुहोस् युवाहरू कम छन् कि जोखिममा र चालु सुरु गर्नुहोस् त्यस तरीकाले मेशिन गर्नुहोस्। आर्थिक पुनः सुरु गर्नुहोस् त्यो बाटो। जो सबै भन्दा राम्रो सार्वजनिक हो स्वास्थ्य रणनीति। एक जवान व्यक्ति बाहिर गइरहेको छ पार्क गर्न। BASKETBALL खेल्दै छैन। र त्यसपछि पछाडि आउँदैछ HOUSE त्यो एक सार्वजनिक होईन स्वास्थ्य रणनीति। त्यसोभए विगतमा त्यो परिष्कृत हुन्छ सार्वजनिक स्वास्थ्य रणनीति र स्टार्ट आर्थिक वृद्धि र त्यो हामीसँग के छ - त्यो हो हामी के मार्फत काम गर्छौं। >> के तपाईंलाई प्रभाव पार्छ? के तपाईं स्थानमा राख्नुहुन्छ तपाईंको आफ्नै स्पीडमा? >> फेडरर सम्पन्न दिशानिर्देशहरू। उनीहरूलाई निर्देशनहरू भनिन्छ किनभने तिनीहरू दिशानिर्देश हुन्। र ती तथ्याES्कहरू अनुसरण गर्न सक्छन् मार्गनिर्देशनहरू। तथ्या .्क फैशन गर्न सक्छन् तिनीहरूको विशिष्ट फिट गर्न दिशानिर्देशहरू सर्कसन्टान्स। त्यहाँ कुनै शंका छैन कि न्यू योर्क एक फरक र थियो जस्तोसुकै समस्या भए पनि देश, सही? त्यो तपाइँको हरेक नम्बर हो हेर्नुहोस्। त्यो तपाईंलाई थाहा छ कि सबै तथ्य। त्यहाँ कुनै शUB्का छैन। हामी यहाँ एक ठूलो चुनौती छ शहरको संख्या भन्दा नयाँ काममा र सबैभन्दा बढि मध्येको एउटा ECONOMIES र ती सबै लिनु पर्छ र म आवश्यक आईएफएस जान्दिन TULSA वा SAN को लागी काम गर्दै एन्टोनियो। त्यसो भए हामी योजनाको साथ आउनेछौं त्यो न्यूयोर्क र को लागि काम गर्दछ फेडरल सरकारले भनेको छैन हामी केहि पनि म्यान्डेट गर्दछौं। उनीहरूले भनिरहेका छन् हामी प्रस्तुत गर्दै छौं मार्गनिर्देशनहरू। >> तपाईं के बनाउँछ राष्ट्रपतिको टीम भन्दै छ स्वयं क्वारन्टीन र दोस्रो प्रश्न तपाईंलाई दिनेछ तपाईले आफैलाई क्वारेन्टाइन सिन्सेस गर्नुभयो न्यू योर्क इस्टर्डेमा। >> राष्ट्रपतिले कुनै पनि भने त्यो न्यू योर्क शहर को लागी यात्रा दुई को लागी स्वयं-क्वारन्टीन हप्ता >> न्यू योर्कमा। >> न्यू योर्क शहरमा। >> होईन, यदि तपाईं न्यू योर्कमा जानुहुन्छ भने शहर तपाईं नयाँ मा Quantant हुनु पर्छ यार्क राज्य। तपाइँ पछाडि नयाँ जानु हुँदैन यार्क सिटी क्वारेटिन गर्न। म नयाँ मा क्वारेटिन जाँदैछु यार्क राज्य। >> त्यो एक मेडिकल सल्लाहकार हो। जीवनमा सब भन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईंलाई थाहा छैन के थाहा छ। मलाई औषधि थाहा छैन र म डक्टरमा जानुहुनेछ। मलाई लाग्छ तपाईलाई अनुसरण गर्नुहोस् सीडीसी दिशानिर्देशहरू र सीडीसी दिशानिर्देशनहरू तपाईंलाई सिफारिस गर्दछन् रहनुहोस् एक DISTANCEWWWAY। सामाजिक रूपमा निराशाजनक र यो नयाँ यार्कको रूपमा पछाडि छ सरकार ब्यबस्थापित। >> स्पेन्सी] तपाईंलाई भनिरहेको छ Quareantine गर्नुपर्छ। >> तिनीहरूले सामाजिक बिरामी पर्छ। यी केसहरू सबै भन्दा माथि छन् COUNTRY यो न्यू योर्क मात्र होइन। हामी फोर्रन्टमा छौं। >> यदि हामी अझ बढी प्राप्त गर्न सक्दैनौं फेड्सबाट, मलाई कसरी थाहा छैन हामी बुजलाई लेख्छौं। त्यो किन यो सेनेट बिल हो धेरै ट्र्रोबल। मलाई प्ले नाइसको राजनीति थाहा छ र कुनै पनि दबावमा राख्नुहुन्न अरू कुनै पनि निर्वाचित अधिकृत, अर्को उनीहरूले तपाईंलाई तपाईं छ भन्नेछन् SHARP / íx यो काम थिएन। यो खुशी हो।
न्यू योर्क सरकार कुवोमोले कोरोनाभाइरस महामारी - //२25/२०२० मा ब्रीफिंग राख्यो
< start="0.333" dur="4.27"> तपाईंलाई आज यहाँ हुनु भएकोमा धन्यवाद। >
< start="1.768" dur="3.136"> मलाई लाग्छ तपाईं को हो भनेर थाहा छ >
< start="4.737" dur="4.372"> यहाँ >
< start="5.037" dur="5.073"> मेरो टाढाको अधिकार, डिप्यूट >
< start="9.242" dur="4.771"> विभागको सुपरिटेन्डेन्ट >
< start="10.243" dur="4.971"> वित्तीय सेवाहरू। >
< start="14.147" dur="4.57"> मसँग लामो समय भयो। >
< start="15.348" dur="6.84"> उहाँ हाम्रो स्वाट टीमको भाग हुनुहुन्छ। >
< start="18.851" dur="7.441"> हामी साम्राज्यको राष्ट्रपति छौं >
< start="22.322" dur="6.239"> कॉलेज, DR ZUCKER, LISA बनाउनुहोस् >
< start="26.425" dur="2.837"> डेरोसा, र बुजट निर्देशक। >
< start="28.695" dur="2.702"> हामीसँग धेरै रुचि छ >
< start="29.395" dur="2.77"> समाचार टुडेलिसा >
< start="31.531" dur="1.334"> डेरोसा, र बुजट निर्देशक। >
< start="32.298" dur="2.903"> हामीसँग धेरै रुचि छ >
< start="32.999" dur="3.737"> समाचार आज, ती चीजहरू चलिरहेका छन्। >
< start="35.335" dur="5.905"> हालको स्थिति, हामी अझै पनि छौँ >
< start="36.869" dur="6.574"> व्यापार जाँदै छ। >
< start="41.374" dur="3.002"> हामीसँग अन्य छैन >
< start="43.576" dur="2.336"> एपीएक्सलाई हिट गर्नुहोस्। >
< start="44.51" dur="2.836"> याद राख्नुहोस् कि लाइन जान्छ, >
< start="46.045" dur="2.936"> आईटी उच्च पोइन्टमा आउनेछ, आईटी >
< start="47.479" dur="4.405"> टिप्स आउनेछ, आईटी पछाडि तल जान्छ। >
< start="49.115" dur="3.136"> हामी त्यस मार्गमा भइरहेका छौं >
< start="52.018" dur="1.535"> मौनटाइन। >
< start="52.385" dur="5.972"> ती संख्यामा भएका संख्याहरू >
< start="53.686" dur="5.906"> आउँदैछन्, %०% अझै पनि आफै >
< start="58.491" dur="4.571"> पुन: समाधान। >
< start="59.726" dur="5.271"> लगभग १%% जनताले कसको परीक्षा लिन्छ >
< start="63.196" dur="3.202"> सकारात्मक आवश्यकता >
< start="65.131" dur="3.837"> अस्पताल। >
< start="66.532" dur="2.937"> र त्यहाँ DEGREES छन् >
< start="69.102" dur="2.202"> अस्पताल। >
< start="69.602" dur="7.841"> तर कुल युनिभर्स कि >
< start="71.437" dur="10.377"> आवाश्यकता आवश्यक छ १%%। >
< start="77.577" dur="8.575"> हामी प्रोजेक्ट मोडेलहरू प्रयोग गर्दछौं। >
< start="81.948" dur="5.939"> हामी कर्नेलले गर्छौं >
< start="86.285" dur="4.271"> प्रोजेक्शन मोडेल, हामी प्रयोग गर्छौं >
< start="88.02" dur="5.339"> म्याकेन्जी, डिपार्टमेन्ट अफ >
< start="90.69" dur="6.273"> स्वास्थ्य प्रोजेक्ट मोडेल गर्दछ। >
< start="93.493" dur="7.107"> र TheYARE महत्वपूर्ण कारण >
< start="97.096" dur="5.038"> तपाईं तिनीहरू प्रोजेक्ट गर्दै हुनुहुन्छ >
< start="100.733" dur="3.336"> POSSIBLE PROPER JEKER TO and >
< start="102.267" dur="3.504"> आवश्यकताको लागि योजना बनाउँदै। >
< start="104.203" dur="5.172"> प्रोजेक्ट मोडेल केवल हुन् >
< start="105.905" dur="4.672"> त्यो, उनीहरूका मोडेलहरू हुन् >
< start="109.509" dur="2.568"> परियोजनाहरू, तिनीहरू होइनन् >
< start="110.71" dur="3.136"> आवश्यक परिभाषा, तर यो >
< start="112.211" dur="2.469"> हामीसँग केवल डिभाइसिस छ >
< start="113.979" dur="2.069"> योजना गर्न, सही? >
< start="114.814" dur="4.471"> डाटा अनुसरण गर्नुहोस्, अनुसरण गर्नुहोस् >
< start="116.182" dur="6.606"> डाटा, डाटा अनुसरण गर्नुहोस्। >
< start="119.419" dur="7.74"> वास्तविक अस्पतालहरु छन् >
< start="122.922" dur="6.373"> भन्दा उच्च दरमा सारियो >
< start="127.292" dur="2.67"> प्रोजेक्ट मोडेलहरू, ती सबै भन्दा बढी >
< start="129.428" dur="2.903"> प्रोजेक्ट मोडेलहरू। >
< start="130.096" dur="2.636"> त्यसोभए OWVIOUSLY थियो >
< start="132.465" dur="3.804"> चिन्ता गर्दै। >
< start="132.865" dur="5.139"> कारण त्यो उच्च प्रभाव >
< start="136.402" dur="4.905"> दर अझ द्रुत माईन्स >
< start="138.137" dur="5.772"> अस्पताल र क्षमता मा >
< start="141.44" dur="4.872"> त्यो लागि क्रिष्टिकल पोइन्ट छ >
< start="144.042" dur="3.504"> अमेरिका जाने मान्छेहरूको संख्या हो >
< start="146.446" dur="3.703"> भित्र अस्पतालहरु। >
< start="147.68" dur="5.739"> सही अब हामी के हेर्दैछौं >
< start="150.282" dur="5.94"> १ 140०,००० केस आउँदैछ >
< start="153.552" dur="4.738"> अस्पतालहरूमा, अस्पताल >
< start="156.356" dur="3.769"> क्षमता 53 53,००० बिडहरू छ। >
< start="158.424" dur="5.338"> त्यो समस्या हो। >
< start="160.259" dur="5.472"> हामी 40०,००० को बारेमा हेरिरहेका छौं >
< start="163.896" dur="2.202"> आईसीयू केसहरू भित्र आउँदैछन् >
< start="165.865" dur="2.902"> अस्पतालहरु >
< start="166.232" dur="4.304"> हामीसँग ,000,००० आईसीयू बेडहरू छन्। >
< start="168.901" dur="4.204"> त्यो एउटा चुनौती हो। >
< start="170.67" dur="2.836"> यसको लागि आईसीयू बिड के हो >
< start="173.239" dur="2.302"> उद्देश्यहरू? >
< start="173.639" dur="2.303"> साधारण एक खाट संग एक बिस्तर >
< start="175.675" dur="2.669"> भेन्टिलर >
< start="176.075" dur="5.372"> भेन्टेलर सब भन्दा ठूलो हो >
< start="178.477" dur="4.872"> उपकरणको लागि महत्वपूर्ण PIECE >
< start="181.58" dur="3.871"> एक सहज देखभाल यूनिट बिस्तर >
< start="183.482" dur="4.405"> यो कारणले गर्दा यो एक प्रासंगिक हो >
< start="185.584" dur="3.437"> बेकार र मानिसहरूलाई अझ बढी आवश्यक छ >
< start="188.02" dur="3.17"> उपयोगिता भन्दा उपयोगी। >
< start="189.155" dur="3.137"> हामी के गर्न चाहन्छौं? >
< start="191.324" dur="3.403"> केसहरूको संख्या घटाउनुहोस् >
< start="192.425" dur="4.004"> अस्पताल भित्र आउँदैछ, स्लो >
< start="194.86" dur="3.203"> भित्र आउने केसहरूको संख्या >
< start="196.563" dur="3.136"> अस्पतालहरु। >
< start="198.197" dur="3.17"> त्यो के हो DR। FAUCI छ >
< start="199.832" dur="3.036"> हरेक दिन टिभीको बारेमा कुरा गर्दै। >
< start="201.501" dur="2.502"> यात्रा फ्लैट, फ्ल्यास >
< start="203.002" dur="2.702"> यात्रा, फ्ल्याट कर्वे। >
< start="204.137" dur="3.736"> मान्छे आउँदै को संख्या ढिला >
< start="205.838" dur="4.337"> अस्पतालहरूमा पनि हामी डील गर्न सक्दछौं >
< start="208.007" dur="4.971"> अस्पतालहरूमा उनीहरूको साथ। >
< start="210.309" dur="5.606"> र हामी त्यसमा काम गरिरहेका छौं। >
< start="213.112" dur="5.072"> उही समयमा, तपाइँलाई बढाउनुहोस् >
< start="216.048" dur="3.571"> अस्पताल क्षमता, सही? >
< start="218.318" dur="3.803"> संख्या खाली गर्न तान्नुहोस् >
< start="219.752" dur="4.404"> अस्पताल भित्र आउदै गरेका केसहरू, >
< start="222.254" dur="2.269"> MEANWHILE तपाइँको अस्पताल उठाउनुहोस् >
< start="224.29" dur="3.403"> क्षमता। >
< start="224.657" dur="3.537"> हामी दुवै काम गर्दैछौं >
< start="227.827" dur="2.368"> सरल। >
< start="228.327" dur="4.605"> हामी एक दिनबाट आएका छौं। >
< start="230.329" dur="6.34"> केसहरूको संख्या घटाउनुहोस् >
< start="233.065" dur="8.442"> भित्र आउँदै, यात्रा फ्लैट, >
< start="236.802" dur="6.24"> स्प्रेड फ्ल्ट्स सूचना स्लाइड गर्नुहोस्। >
< start="241.641" dur="6.239"> हामी केहि गर्न सक्दछौं। >
< start="243.176" dur="6.239"> त्यो व्यावहारिक प्रतिबन्ध छ >
< start="250.416" dur="3.603"> कर्मचारीहरू, सामाजिक डिस्टान्सिंग, >
< start="251.417" dur="3.003"> GYMS बन्द गर्नुहोस्, बन्द गर्नुहोस् >
< start="254.153" dur="1.335"> रेस्टोरन्टहरू। >
< start="254.553" dur="2.97"> नयाँ यॉर्क शहर जहाँ एक मुद्दा >
< start="255.621" dur="3.67"> हामीसँग घनत्वको एक उच्च स्तर छ >
< start="257.657" dur="2.936"> हामी विशेष मा चाहन्थे >
< start="259.425" dur="7.374"> न्यूयॉर्क सिटी पार्क, विशेष गरी >
< start="260.759" dur="7.007"> युवा मानिसहरूसँग, म पनि हुँ >
< start="268.934" dur="1.803"> प्रत्यक्ष म गर्न सक्दछु र रूपमा पनि >
< start="269.768" dur="1.769"> म युवा मानिसहरु मा र गर्न सक्छन् >
< start="270.87" dur="4.237"> MISINFORMATION कि तिनीहरू छन्। >
< start="271.671" dur="5.738"> तपाईं कोरोनाभिरस कैच गर्न सक्नुहुन्छ। >
< start="275.241" dur="3.203"> तपाईंलाई लाग्छ कि तपाईं एक सुपर हुनुहुन्छ >
< start="277.543" dur="3.036"> हीरो, तपाई वास्तवमै हुनुहुन्न। >
< start="278.578" dur="5.172"> तपाईं यो क्याच गर्न सक्नुहुन्छ। >
< start="280.713" dur="3.971"> र तपाईं यसलाई हस्तान्तरण गर्न सक्नुहुन्छ >
< start="283.883" dur="3.102"> तपाइँलाई नै खतरनाक बनाउँछ >
< start="284.817" dur="3.803"> तपाईंले प्रेम गर्ने मानिसहरू। >
< start="287.119" dur="3.103"> तर नयाँ यार्क शहर पार्क छ >
< start="288.754" dur="3.203"> समस्या भयो। >
< start="290.356" dur="2.869"> म आफ्नै समस्या देख्छु >
< start="292.091" dur="2.703"> FIRSTHAND >
< start="293.359" dur="2.869"> म मेयर डे ब्लासिओ र बोल्दछु >
< start="294.927" dur="4.004"> स्पिकर जॉनसन, हामी आए >
< start="296.362" dur="3.57"> २ 24 घण्टामा एउटा योजनाको साथ >
< start="299.064" dur="3.671"> सबैको साथ सहमत छ। >
< start="300.066" dur="6.139"> तिनीहरू योजनाको साथ आउँदछन्। >
< start="302.869" dur="3.636"> हामी अब कार्यान्वयन गरिरहेका छौं >
< start="306.338" dur="3.671"> योजना। >
< start="306.638" dur="4.439"> मैले त्यो योजनामा ​​हस्ताक्षर गरे। >
< start="310.142" dur="2.202"> योजना पाइलट बन्द हुनेछ >
< start="311.21" dur="3.57"> स्ट्रीट्स न्यू यॉर्क शहर कारण >
< start="312.478" dur="3.637"> हामीसँग नयाँ कम ट्राफिक छ >
< start="314.914" dur="2.135"> यार्क सिटी, हामीसँग धेरै छ >
< start="316.248" dur="1.702"> न्यू योर्क शहरमा सवारी साधनहरू। >
< start="317.183" dur="1.969"> खुल्ला मार्गहरू। >
< start="318.084" dur="3.87"> मानिसहरु WALK गर्न चाहन्छन्, उनीहरु चाहन्छन् >
< start="319.285" dur="5.705"> बाहिर जानुहोस् र केही आकाशवाणी पाउनुहोस्। >
< start="322.088" dur="6.439"> तपाइँ एक कम डेन्सन क्षेत्र चाहानुहुन्छ। >
< start="325.124" dur="9.442"> त पायलट बन्द स्ट्रीटहरू >
< start="328.661" dur="6.306"> कारहरू, खोल्ने मार्गहरू >
< start="334.7" dur="4.071"> PEESTIANS >
< start="335.1" dur="4.838"> हामी पनि एन्टेक्ट म्यान्डेटरी >
< start="338.904" dur="4.304"> PLAYGROUND सामाजिक घनत्व। >
< start="340.072" dur="6.74"> सायद नयाँ कन्सेप्ट। >
< start="343.342" dur="5.439"> कुनै सम्पर्क सम्पर्क खेलहरू A मा छैन >
< start="346.945" dur="5.506"> GROUND खेल्नुहोस्। >
< start="348.915" dur="4.303"> उदाहरणको लागि कुनै बास्केटबल छैन। >
< start="352.585" dur="2.669"> तपाइँ यो गर्न सक्नुहुन्न। >
< start="353.352" dur="4.805"> हामी जनतालाई त्यो गर्न आग्रह गर्दैछौं >
< start="355.387" dur="4.438"> अनियमित आधारमा। >
< start="358.29" dur="4.138"> यदि यसका साथ मान्यता छैन भने >
< start="359.959" dur="3.971"> त्यो, हामी त्यसो गर्छौं >
< start="362.562" dur="2.735"> म्यान्डेटरी र हामी वास्तवमै गर्नेछौं >
< start="364.063" dur="3.002"> प्लेग्राउन्डहरू बन्द गर्नुहोस्। >
< start="365.431" dur="3.437"> हामी त्यो गर्न चाहँदैनौं >
< start="367.199" dur="5.172"> प्ले ग्रुन्डहरू जानको लागि ठाउँ हो >
< start="369.001" dur="4.571"> निस्किनुहोस् र एयर खोल्नुहोस्, तर तपाईं >
< start="372.505" dur="4.504"> सामाजिक घनत्व अभ्यास गर्न छ >
< start="373.705" dur="5.639"> एक प्लेग्रोन्डमा पनि। >
< start="377.143" dur="4.337"> र फेरि, यो स्वयम् हो। >
< start="379.478" dur="3.136"> मेयर आईटी बनाउन गइरहेको छ >
< start="381.614" dur="3.102"> स्पष्ट गर्नुहोस् कि यो महत्वपूर्ण हो >
< start="382.748" dur="3.37"> शहरका मानिसहरु >
< start="384.85" dur="3.136"> यदि यो छैन भने, हामी गर्नेछौं >
< start="386.251" dur="2.069"> वास्तवमा खेल को तल बन्द गर्नुहोस् >
< start="388.12" dur="4.004"> मैदान। >
< start="388.453" dur="6.04"> म त्यो गर्न चाहन्न। >
< start="392.258" dur="3.403"> तर हामी यो रिडु गर्न आवश्यक छ >
< start="394.626" dur="3.103"> प्रभाव र त्यो फैलियो >
< start="395.795" dur="3.636"> सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको के हो। >
< start="397.863" dur="2.937"> यो धेरै चाखलाग्दो छ। >
< start="399.565" dur="4.137"> साक्षात्कार सिफारिशको रूपमा >
< start="400.933" dur="4.337"> त्यो घनत्व नियन्त्रण >
< start="403.835" dur="3.471"> उपायहरू काम गरिरहेका हुन सक्छन्। >
< start="405.404" dur="2.936"> र फेरि, हामी यो गरिरहेका छौं >
< start="407.439" dur="3.67"> प्रोजेक्टहरूबाट। >
< start="408.473" dur="4.071"> तर हेर्नुहोस् यस कारण यो छ >
< start="411.243" dur="3.036"> चाखलाग्दो। >
< start="412.678" dur="3.403"> यो विगतको आइतबार, परियोजना >
< start="414.413" dur="4.838"> त्यो अस्पतालमा थियो >
< start="416.214" dur="3.338"> हरेक दुई दिन डबल गर्नुहोस्। >
< start="419.385" dur="2.236"> ल? >
< start="419.685" dur="3.737"> सोमबार, नम्बर सिफारिश >
< start="421.754" dur="5.905"> त्यो अस्पताल थियो >
< start="423.555" dur="5.74"> हरेक UB.4 दिनहरु डब्लिन गर्नुहोस्। >
< start="427.793" dur="2.77"> TUESDAY मा, परियोजनाहरु >
< start="429.428" dur="2.536"> सिफारिश गरियो कि >
< start="430.696" dur="4.805"> अस्पतालहरु डब्लिER्ग थिए >
< start="432.097" dur="7.475"> सबै 7.7 दिन >
< start="435.635" dur="7.006"> अब, यो धेरै राम्रो गर्न को लागी हो >
< start="439.705" dur="7.508"> सत्य हुनुहोस्। >
< start="442.775" dur="6.072"> तर सिद्धान्त दिनुहुन्छ >
< start="447.346" dur="4.271"> डेन्सिटी हामीसँग काम गर्ने छौं, >
< start="448.981" dur="4.972"> यो धेरै नै फैलिन्छ, तर यदि >
< start="451.751" dur="5.605"> तपाईं घनत्व कम गर्नुभयो, तपाईं सक्नुहुन्छ >
< start="454.086" dur="5.205"> धेरै नै छिटो फैलनुहोस्। >
< start="457.49" dur="3.136"> यी प्रोजेक्टहरू, म छु >
< start="459.424" dur="3.271"> ती सबै बाउन्स हेर्नुहोस् >
< start="460.76" dur="4.738"> ठाँउ र म एक ठूलो स्थान छैन >
< start="462.828" dur="4.038"> कुनै एक मा स्टॉक को सौदा >
< start="465.631" dur="9.142"> सबै सही सम्मान संग परियोजना >
< start="466.999" dur="8.341"> सबै तथ्या C्क जारी राख्नुहोस् >
< start="474.907" dur="1.234"> त्यो गरिरहेको छ। >
< start="475.474" dur="0.967"> तर फेरि, यो एक सकारात्मक छ >
< start="476.275" dur="2.902"> साइन इन गर्नुहोस्। >
< start="476.575" dur="4.338"> र म १००% सुरक्षित छैन यो होल्डहरू >
< start="479.311" dur="3.704"> वा प्राप्त छ। >
< start="481.047" dur="2.568"> तर तीरहरू ती मध्ये टु .्गिन्छन् >
< start="483.149" dur="4.337"> सही दिशा। >
< start="483.749" dur="5.505"> र त्यो सधै राम्रो छ >
< start="487.619" dur="2.236"> तीरहरू गलतमा टाउँछन् >
< start="489.388" dur="5.606"> डायरेक्शन >
< start="489.989" dur="6.439"> लामो मानिस भन्न को लागी >
< start="495.127" dur="4.571"> यी आवश्यकताहरू, सामाजिक >
< start="496.562" dur="5.005"> डिस्टन्सिING, कुनै विस्थापनहरू, हैन >
< start="499.832" dur="3.136"> बेकार कामगार, हो, तिनीहरू >
< start="501.7" dur="2.269"> BURDENSome हो। >
< start="503.102" dur="4.104"> मार्ग द्वारा, तिनीहरू प्रभावकारी छन् >
< start="504.103" dur="5.505"> र तिनीहरू आवश्यक र छन् >
< start="507.339" dur="5.272"> उनले यो पोइन्टमा सिफारिश गरे >
< start="509.741" dur="4.505"> तिनीहरू तल छ >
< start="514.38" dur="1.501"> अस्पतालहरु। >
< start="514.88" dur="2.369"> र यो सबै हो। >
< start="516.015" dur="2.902"> अस्पताल कटाइलो गर्दै >
< start="517.382" dur="4.672"> दर, अस्पताल भित्र आउँदैछ >
< start="519.051" dur="4.971"> अस्पतालमा सबै छन् >
< start="522.187" dur="2.369"> मान्छे को दर संग सम्झौता गर्न सक्नुहुन्छ >
< start="524.156" dur="3.57"> भित्र आउँदैछ। >
< start="524.69" dur="4.471"> उही समयमा, वृद्धि भयो >
< start="527.859" dur="1.802"> अस्पतालको क्षमता, के हो >
< start="529.295" dur="2.702"> उच्च बुँद? >
< start="529.795" dur="2.569"> तपाईं त्यो लाइन देख्नुहुन्छ >
< start="532.131" dur="1.801"> सुरु गर्दै >
< start="532.498" dur="2.936"> हामी के अध्ययन गर्दैछौं, त्यो के हो >
< start="534.065" dur="3.037"> त्यो झुटो को झुकाव, के हो >
< start="535.567" dur="3.938"> त्यो लाइनको शीर्ष >
< start="537.236" dur="4.003"> त्यो पोइन्टको हो >
< start="539.638" dur="3.47"> मान्छे आउनेहरूको सबैभन्दा ठूलो संख्या >
< start="541.373" dur="5.505"> अस्पताल प्रणाली भित्र यति छ >
< start="543.242" dur="3.937"> हाम्रो सबैभन्दा ठूलो लोड छ >
< start="547.012" dur="2.135"> एपेक्स >
< start="547.312" dur="2.169"> र जब जाँदै छ >
< start="549.281" dur="2.402"> हुन्छन्। >
< start="549.614" dur="4.305"> फेरि, त्यो एक प्रोजेक्शन हो। >
< start="551.817" dur="3.17"> फेरि, त्यसले AOVUND लाई बढावा दिन्छ। >
< start="554.053" dur="3.169"> तर वर्तमान परियोजना हो >
< start="555.12" dur="5.205"> त्यो २१ दिनमा हुन सक्छ। >
< start="557.356" dur="6.073"> SO रैम्प अस्पतालको क्षमता माथि >
< start="560.459" dur="4.371"> बनाउन - ह्यान्डल गर्न सक्षम हुन >
< start="563.562" dur="3.503"> त्यो एपेक्स भोलीम। >
< start="564.964" dur="2.468"> तपाईं कसरी अस्पतालमा र्याम्प गर्नुहुन्छ >
< start="567.199" dur="2.269"> क्षमता? >
< start="567.566" dur="3.571"> तपाइँ र्याम्प बेड, तपाइँ र्याम्प अप >
< start="569.601" dur="3.671"> स्टाफ र तपाइँ र्याम्प अप उपकरण >
< start="571.27" dur="3.27"> र भेन्टिलरहरू हुन् >
< start="573.405" dur="3.604"> हामी जस्तो उपकरणमा समस्या >
< start="574.673" dur="5.038"> धेरै समय बर्बाद गरियो। >
< start="577.143" dur="4.437"> हामी कहाँ छौं? >
< start="579.845" dur="2.969"> बेड्स, हामी १ 140०,००० चाहिन्छ। >
< start="581.714" dur="3.202"> हामीसँग ,000 53,००० छ। >
< start="582.948" dur="2.369"> त्यो अवस्थित क्षमताको हो >
< start="585.05" dur="1.835"> अस्पतालहरु >
< start="585.45" dur="2.67"> हामी सबै अस्पताल भन्छौं >
< start="587.019" dur="2.969"> तिनीहरूको क्षमता बढाउनको लागि थियो >
< start="588.253" dur="4.639"> 50०% द्वारा। >
< start="590.122" dur="5.572"> मैले तिनीहरूलाई बताएँ कि A >
< start="593.025" dur="5.572"> कन्फरेन्स कल इस्टर्डे। >
< start="595.828" dur="4.737"> यो उनीहरूको लागि एक बोझ हो >
< start="598.73" dur="2.703"> अस्पतालहरू अब तपाईंले भन्नुभएको छ >
< start="600.699" dur="2.97"> क्षमता 50०% बढाउनुहोस्। >
< start="601.566" dur="3.471"> तर म तपाइँलाई भनेको छु, ती >
< start="603.802" dur="3.17"> यसको बारेमा धेरै सामान्य थियो र >
< start="605.17" dur="2.469"> तिनीहरूले हामी जे जान्दछौ >
< start="607.105" dur="2.236"> संग व्यवहार। >
< start="607.773" dur="2.736"> र तिनीहरू चाँडो लाग्न ईगर थिए >
< start="609.474" dur="2.169"> प्लेट गर्न। >
< start="610.643" dur="4.203"> यदि तपाइँ अस्पतालमा वृद्धि गर्नुहुन्छ >
< start="611.776" dur="4.705"> क्षमता 50०% द्वारा, त्यो तपाईंलाई भेटिन्छ >
< start="614.98" dur="6.54"> माथि २ 27,००० बिस्तर >
< start="616.615" dur="7.541"> अवस्थित, IT ले तपाईंलाई TO० सम्म लिन्छ। >
< start="621.654" dur="6.072"> केहि अस्पतालहरु म एक लक्ष्य को रूप मा सोधे >
< start="624.29" dur="3.803"> तपाईंको १००% द्वारा बढाउने प्रयास गर्नुहोस् >
< start="627.86" dur="1.668"> क्षमता। >
< start="628.227" dur="4.604"> %०% मिनीमम थियो। >
< start="629.662" dur="4.704"> लक्ष्य १०० थियो। >
< start="632.965" dur="3.203"> म केहि अस्पतालहरुमा विश्वास गर्छु >
< start="634.499" dur="4.271"> वास्तवमै त्यो गर्न कोशिस गर्नुहोस्। >
< start="636.302" dur="5.271"> र म तिनीहरूलाई प्रयास गर्न प्रोत्साहित गर्छु >
< start="638.904" dur="3.003"> IT को जस्तै असह्य जस्तो गर्नुहोस् >
< start="641.707" dur="2.469"> ध्वनि। >
< start="642.04" dur="4.338"> तर अब समय भएको छ >
< start="644.309" dur="3.036"> आक्रामक गर्नुहोस् र तपाइँ तपाइँको काम गर्नुहोस् >
< start="646.511" dur="4.472"> पहिले कहिल्यै नगर। >
< start="647.479" dur="4.972"> यदि उनीहरूबाट केहि गर्नुहोस्, र म >
< start="651.116" dur="3.136"> केहि विश्वास गर्नुहोस्, त्यो >
< start="652.584" dur="5.339"> एक थप 5,000,००० हुनेछ >
< start="654.386" dur="5.672"> बेड्स, हामी 85 B,००० बिडहरू पाउँदछौं। >
< start="658.057" dur="3.97"> फेमा, इन्जीनियर्सको आर्मी कर्पस, >
< start="660.192" dur="3.237"> हामी जाँदा के गर्दैछौं >
< start="662.16" dur="3.704"> केन्द्र हुनुहुन्छ, अधिवेशन >
< start="663.562" dur="5.205"> केन्द्र, पश्चिम बेरी क्याम्पस, ढुON्गा >
< start="665.998" dur="3.103"> ब्रूक क्याम्पस, हामीलाई लैजान्छ >
< start="668.901" dur="2.87"> ,000 ,000,००० >
< start="669.234" dur="3.738"> अमेरिकी नौसेना शिप "कम्फोर्ट," >
< start="671.904" dur="2.835"> राष्ट्रपति छुट, त्यो >
< start="673.105" dur="5.105"> फिर्ता गर्न १,००० बेड हुनेछ >
< start="674.873" dur="4.538"> होटलहरूबाट, जुन तपाईंलाई लिन्छ >
< start="678.344" dur="5.972"> ,000 ०,००० >
< start="679.545" dur="6.472"> यदि हामी सबै राज्य लिन्छौं >
< start="684.449" dur="3.805"> नयाँ राज्यमा छात्रावासहरू >
< start="686.151" dur="4.605"> यार्क, कि हामीलाई एक हुन्छ >
< start="688.387" dur="7.874"> थप 29,000 बिडहरू। >
< start="690.89" dur="6.706"> हामी ११ ,000, ००० बिडहरूमा छौं। >
< start="696.395" dur="2.669"> तपाईं 140 मा भर पर्दैन >
< start="697.73" dur="4.27"> तपाईलाई आवाश्यक छ, तर हामीले खोजिरहेका छौं >
< start="699.198" dur="5.105"> होटलहरूमा, हामी हेर्दैछौं >
< start="702.133" dur="5.906"> फार्मर नूर्सिOM होम्स, कन्भर्टिंग >
< start="704.436" dur="4.037"> हामीलाई बनाउन अप्ठ्यारा सुविधाहरू >
< start="708.173" dur="3.837"> बिभिन्न >
< start="708.606" dur="5.072"> एक धेरै, सिर्जनात्मक, कृषि, >
< start="712.143" dur="2.103"> तर जीवनमा तपाईले के गर्नुभयो >
< start="713.812" dur="2.67"> गर्नु पर्ने। >
< start="714.38" dur="4.036"> र हामीले के गरिरहेछौ >
< start="716.615" dur="2.67"> बेड क्षमता। >
< start="718.55" dur="2.803"> संरक्षण उपकरण, हामी छौं >
< start="719.418" dur="3.937"> संसारभरि किनमेल गर्नेहरू। >
< start="721.487" dur="2.735"> हामीसँग पूर्ण टीम रहेको छ >
< start="723.488" dur="2.87"> गर्दै छु। >
< start="724.356" dur="5.605"> अब हामीसँग धेरै अधिकार छ >
< start="726.491" dur="5.172"> संरक्षण उपकरण, प्रेम, >
< start="730.095" dur="2.703"> मास्क, सबै लागि GOWNS >
< start="731.796" dur="5.239"> अस्पतालहरू स्ट्याटविड ती हुन् >
< start="732.931" dur="6.473"> यो संग सम्झौता। >
< start="737.169" dur="4.872"> आज कुनै अस्पताल, कुनै NURSE, कुनै हैन >
< start="739.537" dur="4.739"> चिकित्सकले कानुनी रूपमा म भन्न सक्छु >
< start="742.174" dur="4.772"> संरक्षणात्मक उपकरण छैन। >
< start="744.41" dur="4.137"> अहिले नै र यसको लागि >
< start="747.079" dur="1.802"> फोरसेबल भविष्य, हामी एक छौं >
< start="748.681" dur="2.302"> आपूर्ति। >
< start="749.014" dur="3.136"> हामी सुरक्षित छैन ए >
< start="751.116" dur="4.371"> अब देखि तीन हप्ताहरूको लागि आपूर्ति >
< start="752.284" dur="10.244"> अब देखि चार हप्ता, पाँच हप्ता >
< start="755.62" dur="7.609"> अबदेखि। >
< start="763.362" dur="1.235"> तर हामी अहिले किनमेल गर्छौं। >
< start="763.996" dur="1.635"> र यो राम्रो समाचार थियो र >
< start="764.73" dur="2.201"> टीम द्वारा राम्रो काम। >
< start="765.765" dur="2.701"> र फेरि हामी पसलहरू किनमेल गर्छौं >
< start="767.065" dur="4.705"> थप उपकरणहरूको लागि। >
< start="768.6" dur="3.604"> भेन्टिलेटरहरू, भेन्टिलियर्स, >
< start="771.904" dur="1.368"> भेन्टिलेटरहरू। >
< start="772.337" dur="2.97"> हामीलाई ,000०,००० चाहिन्छ। >
< start="773.405" dur="5.939"> हामी अवस्थित अस्पतालमा छौं >
< start="775.441" dur="5.738"> प्रणाली ,000००० वेंट लेटरहरू। >
< start="779.478" dur="3.403"> यो सामान्यमा मात्र हो >
< start="781.313" dur="3.303"> अस्पतालहरूको संचालन। >
< start="783.015" dur="3.136"> हामीले 7,००० खरीद गरेका छौं र हामी छौं >
< start="784.749" dur="5.84"> अझै किनमेल। >
< start="786.285" dur="7.607"> संघीय सरकार पठाइएको छ >
< start="790.722" dur="7.274"> ,000,०००। >
< start="798.13" dur="3.203"> हामी स्प्लिटिंग कहाँ छन् >
< start="800.532" dur="1.168"> एक वेंटलिटर दुई गर्न पर्छ >
< start="801.466" dur="0.868"> चित्रहरू। >
< start="801.833" dur="1.335"> ITALY IT गर्न बाध्य पारिएको थियो। >
< start="802.467" dur="2.77"> म हेर्न चाहन्छु यदि हामी अध्ययन गर्न सक्दछौं >
< start="803.302" dur="3.103"> र यो एक स्मार्ट स्मार्ट र >
< start="805.37" dur="3.537"> एक धेरै बढी समय छ >
< start="806.538" dur="3.837"> यसको साथ प्रयोग गर्दै, तर हामी छौं >
< start="809.041" dur="1.735"> छिटो हेर्दै >
< start="810.509" dur="1.901"> भेन्टिलेटरहरू। >
< start="810.909" dur="2.603"> हामी यसको साथ काम गर्दैछौं >
< start="812.544" dur="2.869"> फेडरल सरकार गर्न को लागी >
< start="813.645" dur="4.672"> अधिक वेंटलिटरहरू खोज्नुहोस्। >
< start="815.547" dur="4.971"> तर त्यो हाम्रो एकल महान् हो >
< start="818.45" dur="5.972"> चुनौती वेंटलिटरहरू हुन्। >
< start="820.652" dur="6.974"> फेरि, आईसीयू बेडहरू, वास्तवमै >
< start="824.556" dur="4.772"> VentILATED BEDAUSE मतलब >
< start="827.76" dur="4.07"> फेरि, यो नम्बर एक हो >
< start="829.461" dur="3.77"> हामीलाई चाहिएको उपकरणको टुक्रा। >
< start="831.963" dur="3.17"> तपाइँसँग बिस्तर छ, तपाइँसँग छ >
< start="833.365" dur="2.736"> उपकरण, तपाईलाई स्टाफ चाहिन्छ, र >
< start="835.267" dur="4.771"> तपाईले स्टाफलाई बुझ्नु पर्ने हुन्छ >
< start="836.234" dur="5.773"> त्यो केहि स्टाफ प्राप्त गर्न जाँदै छ >
< start="840.171" dur="3.271"> बिरामी र तिनीहरू बाहिर आउनेछन्। >
< start="842.141" dur="3.97"> त्यसैले हामी काम गरिरहेका छौं >
< start="843.575" dur="3.036"> सँगै एक शल्य स्वास्थ्य राख्ने >
< start="846.244" dur="2.569"> केयर फोर्स। >
< start="846.745" dur="4.604"> रेटरीहरूमा पछाडि जानुहोस्, पछाडि जानुहोस् >
< start="848.947" dur="6.706"> NURSES र ड्याक्टर जो को हो >
< start="851.483" dur="6.673"> अस्पतालमा नहुनुहोस् >
< start="855.787" dur="6.741"> मेडिकल केयर ऑक्युपेशन, र सोध्नुहोस् >
< start="858.29" dur="5.372"> उत्तरदायीको लागि उनीहरूलाई हस्ताक्षर गर्न >
< start="862.661" dur="2.936"> DESY रिजर्भ गर्नुहोस्। >
< start="863.796" dur="5.405"> भगवानले उनीहरुलाई कृपा गरुन्। >
< start="865.731" dur="14.814"> ,000०,००० मानिसहरूले यसमा हस्ताक्षर गरे >
< start="869.334" dur="12.579"> एक शल्य स्वास्थ्य देखभाल फोर्स। >
< start="880.679" dur="1.968"> फिजिक्स, यी एक आवश्यक >
< start="882.781" dur="3.069"> YOL GUESTS, NURSES, LPNs, ,000०,००० >
< start="885.05" dur="4.838"> मानिसहरूले साइन अप गरे। >
< start="885.984" dur="5.305"> त्यो धेरै नै हो - त्यो ठूलो छ, >
< start="890.022" dur="3.569"> ठुलो कुरा। >
< start="891.423" dur="3.837"> तपाईं बेड बनाउन सक्नुहुन्छ, तपाईं >
< start="893.725" dur="2.936"> उपकरण भेट्टाउन सक्नुहुन्छ, तपाईं छ >
< start="895.393" dur="3.904"> गर्न छ स्टाफ। >
< start="896.795" dur="4.004"> र तपाइँसँग स्टाफ छ >
< start="899.43" dur="3.538"> ती थप बेडहरूको लागि >
< start="900.932" dur="2.37"> अब अस्पतालमा छैन >
< start="903.101" dur="3.304"> प्रणाली। >
< start="903.435" dur="4.504"> र तपाइँसँग स्टाफ छ जब छ >
< start="906.538" dur="5.406"> अवस्थित स्टाफ आईएल हुन्छ। >
< start="908.073" dur="5.405"> वा जसरी काम गर्न सक्नुहुन्न >
< start="912.077" dur="2.903"> हामी जान्छौं कि घण्टा >
< start="913.612" dur="5.305"> मानिसहरूलाई काम गर्न आवश्यक छ। >
< start="915.114" dur="5.071"> त्यो त धेरै राम्रो छ। >
< start="919.051" dur="2.168"> यो पनि धेरै आकर्षक छ। >
< start="920.319" dur="1.768"> मलाई थाहा छैन कि अरू कुनै पनि >
< start="921.353" dur="2.769"> यो भयो। >
< start="922.221" dur="4.437"> हामी भावनात्मक बारेमा कुरा गरेका छौं >
< start="924.256" dur="2.736"> तनाव छ कि यो ल्याउँछ >
< start="926.792" dur="4.137"> पीपल। >
< start="927.125" dur="4.872"> र मानसिक स्वास्थ्य तनाव र >
< start="931.063" dur="2.802"> मानसिक स्वास्थ्य चुनौतीहरू। >
< start="932.131" dur="2.035"> पक्कै पनि वास्तवमै यसबारे कुरा गरिरहेको छैन >
< start="933.999" dur="1.635"> यो >
< start="934.299" dur="4.104"> हामी सबै बारे मा संकलित छौं >
< start="935.767" dur="5.339"> तत्काल नाजुक आवश्यकता, जीवन >
< start="938.537" dur="6.139"> र तत्कालको मृत्यु >
< start="941.239" dur="4.872"> स्थिति जो सही छ, तर >
< start="944.809" dur="2.537"> यसलाई बेवास्ता नगर्नुहोस् >
< start="946.244" dur="3.771"> भावनात्मक ट्राउमा मानिसहरू हुन् >
< start="947.479" dur="2.87"> भावना र भावनात्मक स्वास्थ्य >
< start="950.149" dur="2.602"> ISSUES। >
< start="950.482" dur="5.406"> हामी मानसिक स्वास्थ्यको लागि सोध्छौं >
< start="952.884" dur="5.606"> VOLUNTARILY गर्न पेशेवरहरू >
< start="956.021" dur="5.505"> साइन इन गर्नुहोस् अनलाइन ऑनलाइन प्रदान गर्न >
< start="958.624" dur="5.638"> स्वास्थ्य सेवाहरु। >
< start="961.66" dur="5.138"> ,000,००० मानसिक स्वास्थ्य >
< start="964.395" dur="3.404"> व्यावसायिकहरू सहमत छन् >
< start="966.931" dur="3.538"> VOLUNTEER मानसिक प्रदान गर्न >
< start="967.933" dur="4.804"> मानिसहरूका लागि स्वास्थ्य सेवाहरू >
< start="970.602" dur="2.869"> यो आवश्यक छ। >
< start="972.871" dur="5.873"> कसरी सुन्दर छ त्यो। >
< start="973.605" dur="10.41"> र होटलाइन १-84444-86363-93१,, >
< start="978.877" dur="6.473"> तपाईं HOTLINE कल गर्न सक्नुहुन्छ, >
< start="984.148" dur="2.103"> A को साथ एक नियुक्ति योजना >
< start="985.483" dur="5.707"> मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर >
< start="986.385" dur="6.272"> तिनीहरूलाई कुरा गर्न पूर्ण नि: शुल्क >
< start="991.323" dur="3.837"> तपाईं कस्तो महसुस गरिरहनुहुन्छ। >
< start="992.791" dur="5.005"> र फेरि B,००० लाई धन्यबाद दिनुहोस् >
< start="995.293" dur="6.507"> मानसिक स्वास्थ्य प्रोफेशनल्स जो >
< start="997.929" dur="6.406"> यो नि: शुल्क गर्दै छन्। >
< start="1001.934" dur="3.169"> र म उनीहरुको सामान्य मा निश्चित छु >
< start="1004.469" dur="4.571"> अभ्यास तिनीहरू व्यावहारिक छन्। >
< start="1005.237" dur="6.306"> त्यसो भए यो एक अनौंठो कदम हो >
< start="1009.174" dur="3.003"> उनीहरू द्वारा। म उनीहरुमा निश्चित छु >
< start="1011.676" dur="1.302"> अभ्यास तिनीहरू व्यावहारिक छन्। >
< start="1012.31" dur="1.602"> त्यसो भए यो एक अनौंठो कदम हो >
< start="1013.111" dur="3.17"> उनीहरू द्वारा। >
< start="1014.046" dur="4.137"> म राष्ट्रपति ट्रम्पको साथ बोल्दछु >
< start="1016.414" dur="2.603"> धेरै समय, अन्तिम रात, म हैन >
< start="1018.316" dur="2.67"> उहाँलाई यो बिहानको साथ। >
< start="1019.151" dur="3.804"> म मान्छे बोल्दै छु >
< start="1021.119" dur="2.936"> सेतो घर जो हेन्डलिंग हो >
< start="1023.088" dur="3.036"> यी अपरेसनहरू। >
< start="1024.189" dur="2.336"> म भोइस संग कुरा गरें >
< start="1026.258" dur="2.636"> राष्ट्रपति >
< start="1026.658" dur="4.571"> म JARED KUSHNER संग बोल्दै छु >
< start="1029.027" dur="2.569"> जो एक नयाँ यॉर्कर हुनुहुन्छ, उहाँ जान्नुहुन्छ >
< start="1031.363" dur="3.537"> न्यूयोर्क। >
< start="1031.73" dur="5.005"> र ऊ सेतोमा काम गर्दैछ >
< start="1035.033" dur="2.636"> घर र उहाँ हुनुहुन्छ >
< start="1036.868" dur="4.037"> सबैलाई अनौंठो सहयोगी >
< start="1037.803" dur="6.272"> यी परिस्थितिहरूको। >
< start="1041.039" dur="5.806"> हामी केमा काम गर्दैछौं A >
< start="1044.208" dur="5.339"> COMON CHALLENGE। >
< start="1046.979" dur="6.306"> कुनै एक जना यी वेंटलरहरू र >
< start="1049.681" dur="4.571"> कुनै एक पछाडि एटिपेटेड ए >
< start="1053.418" dur="3.07"> साइट जहाँ तपाइँ चाहानुहुन्छ >
< start="1054.385" dur="5.707"> यो भेन्टिल्टर्स को संख्या >
< start="1056.621" dur="3.904"> सार्वजनिक स्वास्थ्य संग सम्झौता >
< start="1060.225" dur="1.468"> इमरजेन्सीहरू। >
< start="1060.659" dur="3.036"> त्यसोभए हामीले सबै खरीद गर्यौं >
< start="1061.827" dur="4.07"> कि खरीद गर्न सकिन्छ। >
< start="1063.829" dur="6.106"> हामी अहिले सिट्युसनमा छौं कि >
< start="1066.03" dur="6.34"> हामी स्वीकार गर्न कोशिस गर्दैछौं >
< start="1070.068" dur="4.772"> यी वेंटलिटरहरूको उत्पादन >
< start="1072.504" dur="4.171"> र भेन्टिलेटर एक कम्प्लेकेट छ >
< start="1074.973" dur="3.503"> उपकरणको टुक्रा। >
< start="1076.808" dur="7.141"> राष्ट्रपति र उनको टीम म >
< start="1078.61" dur="7.207"> DPA WELL प्रयोग गर्दैछन् भन्ने लाग्छ >
< start="1084.082" dur="5.572"> कारण यो सामान्य छ A - IT >
< start="1085.95" dur="5.172"> एक बेफिक्री उपकरण छ जब डिलि। >
< start="1089.787" dur="2.837"> निजी कम्पनीहरूको साथ, सही? >
< start="1091.256" dur="4.204"> हामीलाई तपाईको सहयोग चाहिन्छ। >
< start="1092.758" dur="4.17"> हामी तपाईंको सहयोगको लागि मांग गर्न सक्छौं। >
< start="1095.594" dur="2.769"> वा तपाइँ मद्दत गर्न सहमत हुनुहुन्छ र >
< start="1097.062" dur="1.901"> हामी तपाईंलाई थाँहा गर्न आवश्यक छ र >
< start="1098.496" dur="3.538"> उत्पादन बढाउनुहोस्। >
< start="1099.097" dur="5.906"> त्यो संग पनि, त्यहाँ एक र्याम्प छ >
< start="1102.167" dur="4.604"> अप्ट टाईम कम्पनीको लागि पुट्नका लागि >
< start="1105.136" dur="3.838"> सँगै आपूर्ति श्रृंखला, PUT >
< start="1106.904" dur="5.573"> सँगै वर्कफोरस, र पाउनुहोस् >
< start="1109.107" dur="4.705"> यी चीजहरू माथि र भागिरहेका छन्। >
< start="1112.611" dur="4.571"> त्यसो भए फोर्ड तपाईले सुन्नुहुनेछ सहायता, >
< start="1113.945" dur="5.372"> सामान्य मोटर्सले मद्दत गर्दछ। >
< start="1117.316" dur="4.404"> समस्या हाम्रो समय रेखा छ >
< start="1119.45" dur="6.34"> छोटो, हामी एक हेरे छौं >
< start="1121.853" dur="7.808"> एपेक्स २१ दिन त्यो क्रममा। >
< start="1125.924" dur="8.174"> भेन्टेलरहरू र यी प्राप्त गर्न >
< start="1129.794" dur="7.841"> व्यवसाय कन्सोर्टियम पुट >
< start="1134.232" dur="6.44"> सँगै, आपूर्ति श्रृंखला, >
< start="1137.769" dur="4.004"> डेलिभरीहरू, र्याम्पेड अप छ >
< start="1140.805" dur="2.135"> एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिफिक्ट टास्क। >
< start="1141.907" dur="4.137"> र यो हाम्रो केहि हो >
< start="1143.074" dur="4.038"> टीम यसका साथ काम गरिरहेको छ >
< start="1146.178" dur="4.003"> सेतो घर टीम र म चाहन्छु >
< start="1147.245" dur="5.572"> राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद दिनुहोस् >
< start="1150.314" dur="3.07"> सहयोग र उनको टीम को लागी >
< start="1152.95" dur="1.869"> तिनीहरूको सहयोग। >
< start="1153.518" dur="3.771"> हामी धेरै रचनात्मक गर्दैछौं, >
< start="1154.953" dur="5.072"> हामी देशहरूमा कुरा गर्दैछौं >
< start="1157.422" dur="4.371"> संसारमा नयाँ को रूप मा हेर्नुहोस् >
< start="1160.158" dur="2.036"> कम्पनीहरु के गर्नु पर्छ >
< start="1161.927" dur="3.87"> उत्पादन >
< start="1162.327" dur="6.706"> हामी गोरे कुरा गर्दैछौं >
< start="1165.93" dur="4.572"> अर्को कन्सेप्टको बारेमा घर। >
< start="1169.167" dur="4.271"> न्यू योर्क सबैभन्दा ठूलो आवश्यक छ >
< start="1170.636" dur="4.303"> संख्याहरूको सर्तहरूमा। >
< start="1173.572" dur="3.302"> न्यू योर्क पनि सबैभन्दा छ >
< start="1175.072" dur="2.136"> सर्तहरूको शर्तहरू आवश्यक छ >
< start="1177.008" dur="0.5"> समय >
< start="1177.341" dur="2.136"> ठीक? >
< start="1177.642" dur="4.905"> हामी हाम्रो अपੈਕਸको बारेमा कुरा गर्छौं, हामी कुराकानी गर्छौं >
< start="1179.611" dur="4.338"> यस बारे >
< start="1182.68" dur="3.771"> विभिन्न क्षेत्रहरू आसपास >
< start="1184.082" dur="3.437"> देश भइरहेको छ >
< start="1186.584" dur="3.504"> बिभिन्न कुराहरु >
< start="1187.653" dur="5.438"> हामी केही तरिकाहरूमा छौं। >
< start="1190.222" dur="5.638"> हाम्रो केस नम्बर पहिले भयो। >
< start="1193.225" dur="6.506"> हाम्रो यात्रा पहिलो छ। >
< start="1195.994" dur="5.005"> लामो शट द्वारा। >
< start="1199.865" dur="3.837"> विभिन्न क्षेत्रहरू हुनेछन् >
< start="1201.132" dur="4.571"> विभिन्न समय मा तिनीहरूको यात्रा। >
< start="1203.835" dur="4.905"> मैले राष्ट्रपतिलाई के भने र >
< start="1205.837" dur="6.373"> उसको टीम थियो, हेर, र्याथेर >
< start="1208.873" dur="5.973"> भन्दै हामी प्रदान गर्छौं >
< start="1212.343" dur="5.373"> सम्पूर्ण देशका लागि उपकरण >
< start="1215.013" dur="7.574"> एक पटकमा, अब हामीसँग कुरा गरौं >
< start="1217.849" dur="6.273"> क्रिटिकल चाहिएको ठेगाना >
< start="1222.721" dur="3.003"> त्यो हट स्पट, एक पटक तातो >
< start="1224.256" dur="2.969"> स्पट टर्न्स, तपाईंले राख्नुभएको कारण >
< start="1225.857" dur="6.106"> एपेक्स र त्यसपछि तपाईं एक यात्रा छ, >
< start="1227.358" dur="5.306"> र यात्रा स्वतन्त्र छ >
< start="1232.797" dur="3.004"> छोटो, एक पटक तपाईंको ठेगाना जुन होट >
< start="1234.232" dur="4.771"> स्पट त्यो ईन्टेन्सिटीको साथ, >
< start="1239.137" dur="3.103"> PERSONNEL, तब शिफ्ट >
< start="1241.172" dur="3.103"> अर्को हट स्पट। >
< start="1242.374" dur="4.904"> र रोलिंगको अधिक छ >
< start="1244.408" dur="5.039"> देश पार गर्नुहोस् >
< start="1247.411" dur="3.437"> एक तथ्याPL्क DepPLOYMENT, सही? >
< start="1249.581" dur="4.971"> म संघीय सरकारमा थिएँ >
< start="1250.982" dur="4.004"> HUD मा, म दर्जनौं मा काम गर्थे >
< start="1254.686" dur="1.201"> निराशा। >
< start="1255.119" dur="2.303"> तपाईं एक डिसास्टर संग सम्झौता >
< start="1256.02" dur="4.638"> तपाइँको अगाडि त्यो समयमा र >
< start="1257.555" dur="3.47"> त्यसोभए तपाईं अर्कोमा जानुहुन्छ >
< start="1260.792" dur="2.002"> प्रकोप। >
< start="1261.159" dur="4.271"> र मलाई लाग्छ कि रोलिंग >
< start="1262.927" dur="3.77"> DepPLOYMENT यहाँ काम गर्न र गर्न सक्नुहुन्छ >
< start="1265.564" dur="4.67"> न्यू योर्कको सुरुवातमा, >
< start="1266.831" dur="3.737"> निर्भरता हामी १००% हुन्छौं >
< start="1270.368" dur="1.469"> सहयोगी >
< start="1270.701" dur="3.838"> हामीलाई सम्पूर्णबाट मद्दत चाहिन्छ >
< start="1271.97" dur="4.271"> अब देशको अधिकार। >
< start="1274.673" dur="3.736"> हामीबाट स्रोतहरू चाहिन्छ >
< start="1276.374" dur="5.305"> पूरा देश अहिले नै। >
< start="1278.543" dur="6.106"> र हाम्रो अप्क्स पहिलो हो >
< start="1281.812" dur="9.577"> र हाम्रो संख्या सबैभन्दा माथि छ। >
< start="1284.783" dur="8.474"> तर एपेक्स उच्च पोइन्ट हुनेछ >
< start="1291.523" dur="2.869"> क्रममा देश पार गर्नुहोस्। >
< start="1293.391" dur="3.67"> त्यसैले मैले सेतो हाउसलाई भनेँ >
< start="1294.526" dur="5.205"> हामीलाई पठाउनुहोस् उपकरण >
< start="1297.195" dur="5.572"> आवश्यक छ, हामीलाई व्यक्तित्व पठाउनुहोस्। >
< start="1299.865" dur="7.373"> जसरी हामी हाम्रो विगत पाउँदछौं >
< start="1302.9" dur="6.24"> क्रिटिकल पल, हामी गर्दछौं >
< start="1307.372" dur="5.038"> पुनर्वस्तु कि उपकरण र >
< start="1309.274" dur="7.174"> अर्को होट स्पटमा व्यक्ति। >
< start="1312.544" dur="6.239"> र म व्यक्तिगत ग्यारेन्टी दिनेछु >
< start="1316.581" dur="7.541"> आईटी र व्यक्तिगत व्यवस्थापन आईटी। >
< start="1318.917" dur="7.374"> यदि तपाईं हामीलाई १ US,००० पठाउनुहोस् >
< start="1324.255" dur="5.205"> भेन्टिलियर्स र हाम्रो पछाडि >
< start="1326.424" dur="4.572"> हराउनुहोस् एन्जलहरू १G,००० को आवश्यकता छ >
< start="1329.594" dur="2.469"> भेन्टिलेटरहरू, हामी लिन सक्छौं >
< start="1331.129" dur="3.603"> यहाँबाट उपकरण, हामी लिन सक्छौं >
< start="1332.197" dur="6.105"> यहाँबाट व्यक्ति, हामी >
< start="1334.865" dur="4.773"> यहाँबाट पाठ लिन सक्नुहुन्छ, >
< start="1338.436" dur="2.903"> हामी पहिले जान्छौं, हामी ती चीजहरू सिक्न सक्छौं >
< start="1339.771" dur="2.502"> त्यो ईश्वरको शिक्षा हो। >
< start="1341.473" dur="5.138"> कारण हामी हुन गइरहेका छौं >
< start="1342.407" dur="5.806"> पहिलो कुरा बाट। >
< start="1346.745" dur="2.736"> र म व्यक्तिगत ग्यारेन्टी दिन्छु >
< start="1348.346" dur="2.869"> हामी त्यो उपकरण ल्याउँछौं, हामी >
< start="1349.614" dur="3.303"> त्यो व्यक्ति ल्याउनेछ, हामी चाहन्छौं >
< start="1351.382" dur="3.304"> प्राविधिक सहयोग ल्याउनुहोस् >
< start="1353.05" dur="4.572"> अर्को अर्को हट स्पटमा। >
< start="1354.82" dur="4.671"> मैले राष्ट्रपतिलाई भनेँ, म हुनेछु >
< start="1357.756" dur="2.635"> अर्को होटलमा जानको लागि भाग >
< start="1359.624" dur="4.271"> हाम्रो टीम संग स्पट। >
< start="1360.525" dur="3.637"> हामी सहयोगको लागि देशलाई सोधिरहेका छौं >
< start="1364.029" dur="2.869"> अमेरिका >
< start="1364.296" dur="4.47"> हामी फेरी फर्कनेछौं। >
< start="1367.032" dur="4.438"> र हामी सबै यो सँगै छौं। >
< start="1368.9" dur="3.737"> र हामी तिनीहरूको सहयोगका लागि सोधिरहेका छौं >
< start="1371.603" dur="7.04"> र तिनीहरूको कन्सेडरेशन र हामी >
< start="1372.771" dur="8.474"> DIVIDENDS सँग यसको भुक्तानी गर्नेछ। >
< start="1378.777" dur="6.606"> सेनेट पनि विचारशील छ A >
< start="1381.379" dur="5.972"> TR २ ट्रिलियन बिल जो हो >
< start="1385.516" dur="6.907"> कोट / अनकुट विश्वासको लागि >
< start="1387.485" dur="5.339"> व्यवसायहरू, व्यक्तिगत र >
< start="1392.557" dur="1.034"> सरकारहरू। >
< start="1392.957" dur="4.538"> यो वास्तवमै लागि भयानक हुन सक्छ >
< start="1393.725" dur="5.539"> न्यू योर्क राज्य। >
< start="1397.629" dur="3.003"> $ २ ट्रिलियन बिल, के गर्छ >
< start="1399.397" dur="1.635"> आईटी यो न्यू योर्क राज्य को लागी हो >
< start="1400.765" dur="4.037"> सरकार? >
< start="1401.165" dur="7.442"> आईटीको मतलब $ 8.8 बिलियन। >
< start="1404.936" dur="4.304"> $ 8.8 बिलियन ध्वनि धेरै मन पर्छ >
< start="1408.74" dur="2.235"> पैसाको। >
< start="1409.374" dur="2.636"> बजट निर्देशक तपाईं कुरा गर्न सक्नुहुन्छ >
< start="1411.109" dur="5.205"> संख्याहरू मार्फत। >
< start="1412.144" dur="7.139"> तर हामी राजस्वमा हेर्दैछौं >
< start="1416.447" dur="8.542"> $ IL बिलियनको शर्टफल, OR १० >
< start="1419.417" dur="8.909"> बिलियन, $ १ B बिलियन। >
< start="1425.123" dur="4.871"> यो प्रतिक्रिया यो भाइरस छ >
< start="1428.459" dur="3.438"> सम्भवतः अमेरिकाको लागत। १ >
< start="1430.128" dur="3.17"> बिलियन, यो सम्भवतः खर्च हुनेछ >
< start="1432.03" dur="2.101"> अमेरिकी सतर्क बिल बिल डलरहरू कहिले >
< start="1433.431" dur="2.069"> हामी सम्पन्न भयौं। >
< start="1434.265" dur="4.805"> न्यू योर्क शहर केवल $ १. G प्राप्त गर्दछ >
< start="1435.633" dur="6.006"> यस प्याकेजबाट बिलियन। >
< start="1439.204" dur="6.673"> त्यो बुकेट मा एक ड्रप छ। >
< start="1441.773" dur="5.105"> म हाम्रो घर सम्झौताको कुरा गर्छु, >
< start="1446.011" dur="1.367"> क DE्ग्रेसनल डेलीगेशन, यो >
< start="1447.012" dur="2.502"> बिहान >
< start="1447.512" dur="2.269"> मैले तिनीहरूलाई यो गर्न नहुने भनेको थिएँ >
< start="1449.915" dur="5.304"> तपाइँ जान्नुहुन्छ, म बुझ्दछु >
< start="1452.918" dur="4.337"> थियरी र रिपब्लिकन सेनेट गर्नुहोस् >
< start="1455.353" dur="3.837"> सिद्धान्त, तर हामीलाई घर चाहिन्छ >
< start="1457.389" dur="3.436"> समायोजन गर्नुहोस्। >
< start="1459.324" dur="4.103"> र त्यो घर बिल गर्नुहोस् >
< start="1460.959" dur="2.969"> ओभर, न्यू योर्क राज्य प्राप्त भयो $ १। >
< start="1463.561" dur="5.806"> बिलियन >
< start="1464.062" dur="7.44"> सेनेट बिलमा, हामी $ 8.ET प्राप्त गर्छौं >
< start="1469.501" dur="3.737"> बिलियन >
< start="1471.636" dur="1.969"> र, स्वागत छ, तपाईं मात्र - ठूलो >
< start="1473.371" dur="2.002"> खर्च गर्दै। >
< start="1473.738" dur="2.636"> हामी एक ठूलो खर्च गर्ने स्थिति होइनौं। >
< start="1475.507" dur="2.535"> म हरेक वर्ष कर कटौती गर्छु। >
< start="1476.508" dur="4.07"> मसँग सबैभन्दा कम ग्रोथ रेट छ >
< start="1478.175" dur="4.972"> आधुनिक मा राज्य बजेट >
< start="1480.711" dur="2.803"> राजनीतिक ईतिहास। >
< start="1483.281" dur="2.969"> ल? >
< start="1483.648" dur="3.003"> हामी फ्रिगल छौं र हामी छौं >
< start="1486.384" dur="1.535"> EFFICIENT। >
< start="1486.784" dur="2.77"> म तिमीलाई बताउँदै छु, ती संख्याहरू >
< start="1488.053" dur="4.604"> काम नगर्नुहोस् र मैले घर भनेको >
< start="1489.687" dur="3.604"> सदस्य जो हामीलाई वास्तवमै चाहिन्छ >
< start="1492.79" dur="2.503"> तिनीहरूको सहयोग। >
< start="1493.425" dur="5.071"> संख्याहरूको सर्तहरूमा, कुल >
< start="1495.426" dur="3.604"> परिक्षण, हामी १० 10,००० सम्ममा छौँ >
< start="1498.63" dur="2.235"> पीपल। >
< start="1499.164" dur="5.005"> नयाँ परीक्षणहरू हामी १२,००० सम्ममा छौं। >
< start="1500.999" dur="4.805"> YESTERDAY को रूपमा, को बारे मा 28% >
< start="1504.302" dur="2.969"> सबै परीक्षण राष्ट्रभाषण गरिएको छ >
< start="1505.937" dur="1.635"> नयाँ राज्य द्वारा प्रस्तुत >
< start="1507.405" dur="2.603"> यार्क। >
< start="1507.705" dur="5.072"> न्यूयार्कको राज्य अधिक गर्दैछ >
< start="1510.141" dur="4.337"> मा कुनै पनि राज्य परीक्षण गर्दै >
< start="1512.91" dur="2.904"> संयुक्तराज्य अमेरिका। >
< start="1514.612" dur="2.536"> र म टीमको धेरै प्रोड हुँ >
< start="1515.947" dur="4.104"> हामी कसरी परिचालन गर्छौं र >
< start="1517.281" dur="3.104"> यो परीक्षण पाउनुहोस् र >
< start="1520.185" dur="3.369"> भाग्नु >
< start="1520.518" dur="3.337"> मानिसहरू सोध्छन् कसरी परीक्षण गर्दछ >
< start="1523.688" dur="4.438"> काम >
< start="1523.988" dur="4.738"> राज्य क्यान मा कुनै पनि अस्पताल >
< start="1528.259" dur="4.038"> PERFORM TESTING। >
< start="1528.86" dur="4.304"> तपाईं अस्पताल भित्र हिंड्न सक्नुहुन्छ >
< start="1532.43" dur="3.003"> BUFFALO, न्यू यार्क यदि तपाईंले देखाउनुभयो >
< start="1533.298" dur="4.837"> लक्षण र भेट्नुहोस् >
< start="1535.566" dur="3.937"> प्रोटोकोल, तपाइँ परीक्षण गर्न सक्नुहुन्छ। >
< start="1538.269" dur="4.705"> रणनीतिक, हामी परीक्षण परीक्षण गर्छौं >
< start="1539.637" dur="5.605"> सबैभन्दा बढी क्षेत्रहरूमा, कहाँ >
< start="1543.107" dur="2.97"> हामी ड्राइभ थ्रस र सेट >
< start="1545.376" dur="0.968"> ET CETERA। >
< start="1546.211" dur="1.501"> किन? >
< start="1546.478" dur="2.969"> हामी सकारात्मक हिन्टनिंग गर्दै छौं। >
< start="1547.846" dur="4.837"> हामी सकारात्मक छौं त्यसैले हामी >
< start="1549.581" dur="3.436"> तिनीहरूलाई अलग गर्न र हटाउन सक्नुहुन्छ >
< start="1552.817" dur="3.203"> फिंजाउनु। >
< start="1553.15" dur="5.172"> तपाईं प्राप्त गर्न को लागी अधिक मन पर्छ >
< start="1556.154" dur="2.669"> एक उच्च सकारात्मक मा सकारात्मक >
< start="1558.456" dur="2.702"> क्षेत्र, सही? >
< start="1558.956" dur="6.173"> ब्रोंक्समा एउटा ड्राइभ-थ्रु सेट गर्नुहोस् >
< start="1561.292" dur="5.339"> VERSUS एक ड्राइभ-थरू मा >
< start="1565.262" dur="2.803"> चौटाउका काउन्टी, तपाइँ पाउनुहुनेछ >
< start="1566.765" dur="3.402"> ब्रोंक्समा अधिक सम्भावितहरू। >
< start="1568.199" dur="4.004"> र हामी के चाहन्छौं। >
< start="1570.301" dur="3.837"> तर यहाँ पनी कुनै पनि >
< start="1572.337" dur="4.404"> राज्य, यदि तपाईं लक्षण हुनुहुन्छ, तपाईं >
< start="1574.272" dur="3.47"> चिन्ता लिनुहोस्, तपाईं भित्र जान सक्नुहुन्छ >
< start="1576.875" dur="2.869"> कुनै पनि अस्पताल र त्यो अस्पताल >
< start="1577.875" dur="3.304"> एक परीक्षण प्रदर्शन गर्न सक्नुहुन्छ। >
< start="1579.878" dur="3.302"> पोजिटिभ केसहरूको संख्या, हामी हौं >
< start="1581.312" dur="5.472"> TO०,००० सम्म। >
< start="1583.314" dur="9.276"> नयाँ केस संख्या, .,०००। >
< start="1586.918" dur="7.173"> फेरि तपाईले नम्बरहरू देख्नु भयो। >
< start="1592.723" dur="2.169"> १,000,००० - SORRY, १,000,००० न्यू योर्क >
< start="1594.225" dur="3.904"> CITY >
< start="1595.026" dur="4.738"> ,000,००० WESTCHESTER, ,000,००० IN >
< start="1598.262" dur="5.406"> नासाउ काउन्टी। >
< start="1599.898" dur="8.275"> सापेक्ष पश्चिमी हामी छौं >
< start="1603.801" dur="5.006"> नाटकीय रूपमा के थियो एक हो >
< start="1608.306" dur="3.236"> व्यावहारिक वृद्धि। >
< start="1608.94" dur="5.638"> त्यसोभए राम्रो समाचार साइडमा फेरि, >
< start="1611.675" dur="3.337"> तपाईं दर कम गर्न सक्नुहुन्छ >
< start="1614.712" dur="0.767"> जानकारी। >
< start="1615.145" dur="0.968"> हो। >
< start="1615.613" dur="3.07"> तिमीलाई कसरी थाँहा छ? >
< start="1616.247" dur="2.87"> हामी केमा थियौं हेर्नुहोस् >
< start="1618.817" dur="2.168"> WESTCHESTER। >
< start="1619.25" dur="4.805"> त्यो होट्स्ट क्लस्टर थियो >
< start="1621.118" dur="6.173"> अमेरिकाको संयुक्त राज्य अमेरिका। >
< start="1624.189" dur="3.503"> हामी स्कूलहरू बन्द गर्यौं, हामी बन्द भयौं >
< start="1627.425" dur="1.635"> जम्मा। >
< start="1627.825" dur="4.138"> हामी परीक्षणमा भेट्टायौं। >
< start="1629.193" dur="4.304"> र हामी नाटक मात्र सुस्त छौं >
< start="1632.096" dur="4.137"> वृद्धि >
< start="1633.631" dur="5.639"> NASSAU काउन्टी ,000,००० छ। >
< start="1636.367" dur="3.57"> तिनीहरू पछाडि सापेक्षिक छन् >
< start="1639.404" dur="3.203"> WESTCHESTER। >
< start="1640.071" dur="3.436"> शून्य जस्तै जब WESTCHESTER >
< start="1642.74" dur="4.104"> सुरु भयो। >
< start="1643.641" dur="4.004"> त्यसो भए हामी यसलाई काट्न सक्छौं र हामी छौँ >
< start="1646.977" dur="2.87"> स्लाउड आईटी। >
< start="1647.779" dur="4.537"> फेरि, तपाईं यो फैलिएको देख्नुहुन्छ >
< start="1649.98" dur="2.904"> हामीले भनिएको राज्यलाई पार गर्नुहोस् >
< start="1652.45" dur="5.705"> आईटी चाहिन्छ। >
< start="1653.017" dur="5.639"> हालको संख्या, ,000०,००० परीक्षित >
< start="1658.289" dur="2.736"> सकारात्मक >
< start="1658.79" dur="7.073"> पोजिटिभ परीक्षण गर्नेहरू मध्ये १२% >
< start="1661.159" dur="9.208"> HOSPITALIZED छन्। >
< start="1665.997" dur="4.671"> 3% सकारात्मक आईसीयू मा छन्। >
< start="1670.501" dur="4.037"> ल? >
< start="1670.801" dur="5.373"> यो फेरि समय छ। >
< start="1674.672" dur="2.869"> म चिन्तित छु, म निर्भर छु, के >
< start="1676.307" dur="4.871"> यसको अर्थ के हो? >
< start="1677.675" dur="7.374"> ,000०,००० परीक्षण गरिएको सकारात्मक। >
< start="1681.312" dur="10.577"> १२% अस्पतालमा छन्। >
< start="1685.183" dur="9.076"> %% आईसीयू मा छन्। >
< start="1692.023" dur="5.472"> यदि तपाईं यी 3% मा हेर्नुहुन्छ, तिनीहरू >
< start="1694.392" dur="5.105"> प्री-डोमिनटली सेनियर हो >
< start="1697.629" dur="3.57"> सिटीजनहरू, मानिसहरूसँग >
< start="1699.631" dur="4.404"> अन्वेषण ILLNESSES, मान्छेहरू >
< start="1701.332" dur="3.77"> EMPHYSEMA संग, मानिसहरू संग >
< start="1704.168" dur="2.836"> संकुचित इम्मुन प्रणाली। >
< start="1705.236" dur="3.971"> त्यो सबै के हो यो बारे। >
< start="1707.138" dur="3.503"> सबै नोइस, सबै ऊर्जा, >
< start="1709.34" dur="5.906"> यो लगभग%% हो। >
< start="1710.775" dur="7.474"> लामो सास लेउ। >
< start="1715.38" dur="4.471"> अब, त्यो%%, त्यो मेरो आमा हो, >
< start="1718.383" dur="3.002"> त्यो तपाईंको आमा हो, त्यो हो >
< start="1719.984" dur="3.436"> तपाईंको बहिनी, हामी यिनीहरू हौं >
< start="1721.519" dur="3.337"> माया गर्नुहोस्, यी हाम्रो ग्रान्डपोर्टहरू हुन् >
< start="1723.554" dur="2.269"> र हामी त्यो सबै गर्छौं हामी >
< start="1724.989" dur="1.135"> सबैलाई जोगाउन सक्नुहुन्छ >
< start="1725.957" dur="1.334"> उनीहरु। >
< start="1726.257" dur="2.002"> र म जनतालाई दिन्छु >
< start="1727.424" dur="1.902"> नयाँ योर्कको मेरो शब्दको राज्य >
< start="1728.393" dur="4.271"> हामी यो गर्दैछौं। >
< start="1729.46" dur="5.873"> तर हामी 3% को बारेमा कुरा गर्दैछौं >
< start="1732.797" dur="5.138"> मानिस जसले सकारात्मक परीक्षण गरे >
< start="1735.466" dur="7.04"> हामी को बारे मा काम गर्दै छौं। >
< start="1738.069" dur="4.771"> धेरै प्रभावित तथ्या .्कहरू, हामी हौं >
< start="1742.639" dur="2.803"> ,000०,००० >
< start="1742.973" dur="3.971"> अर्को नजिकको राज्य नयाँ जर्सी हो >
< start="1747.078" dur="4.004"> क्यालिफोर्निया २। >
< start="1747.946" dur="3.57"> यो वास्तवमै भयानक हो >
< start="1751.215" dur="3.303"> बिभिन्न >
< start="1751.649" dur="6.306"> र यो के म संगठित छ >
< start="1754.651" dur="8.176"> जो कोही पनि सूचीबद्ध हुनेछ। >
< start="1758.089" dur="5.338"> हामीसँग दस पटक समस्याको रूपमा छ >
< start="1762.96" dur="3.104"> नयाँ जर्सी। >
< start="1763.561" dur="4.437"> तपाईं हामीलाई क्यालिफोर्निया गर्न सक्नुहुन्छ >
< start="1766.197" dur="2.302"> के सर्तहरु मा अधिक छ >
< start="1768.132" dur="3.47"> लोकप्रिय >
< start="1768.633" dur="6.839"> हामीसँग १IM पटक समस्या छ। >
< start="1771.736" dur="4.737"> अब, तपाइँ आफैलाई सोध्नु छ >
< start="1775.606" dur="5.606"> किन >
< start="1776.607" dur="5.172"> किन न्यू योर्क यस्तो छ A >
< start="1781.345" dur="3.504"> उच्च संख्या। >
< start="1781.912" dur="4.171"> र पूर्ण रूपमा फेरि, हामी >
< start="1784.982" dur="2.336"> यसको अर्थ के हो भनेर बुझ्नुहोस्। >
< start="1786.217" dur="3.637"> तर नयाँ योर्क किन गर्छ >
< start="1787.451" dur="4.605"> एक उच्च संख्या? >
< start="1789.988" dur="4.271"> र यो मेरो व्यक्तिगत राय हो। >
< start="1792.19" dur="5.204"> म निश्चित बनाउन चाहन्छु कि म >
< start="1794.392" dur="3.336"> व्यक्तिगतबाट तथ्यहरू अलग गर्नुहोस् >
< start="1797.528" dur="4.404"> ओपिनियन। >
< start="1797.861" dur="5.306"> तथ्यहरू जुन म तपाईंलाई दिन्छु >
< start="1802.066" dur="2.569"> मसँग असल तथ्यहरू छन् र फेरी पनि >
< start="1803.3" dur="2.403"> डेटा दिन मा परिवर्तन हुन्छ। >
< start="1804.769" dur="3.036"> तर म तपाईंलाई वास्तवमै के दिन्छु >
< start="1805.837" dur="3.936"> दिन आधारमा एक दिन छ। >
< start="1807.939" dur="4.338"> व्यक्तिगत राय, किन नयाँ गर्छ >
< start="1809.907" dur="4.805"> यार्क धेरै धेरै केसहरू छन् >
< start="1812.41" dur="4.204"> अरू कुनै राज्य? >
< start="1814.845" dur="5.105"> यो कसरी हुन सक्छ? >
< start="1816.748" dur="4.07"> तपाईं १ 15 पटकको संख्या हुनुहुन्छ >
< start="1820.084" dur="3.637"> क्यालिफोर्निया। >
< start="1820.952" dur="4.57"> IEEEEEEEEE, MEAN, वास्तवमै BREATHTAKING छ >
< start="1823.854" dur="2.803"> जब तपाईं यसको बारेमा सोच्नुहुन्छ। >
< start="1825.656" dur="4.004"> T० पटकको साथ मासाचुसेट्स >
< start="1826.79" dur="5.54"> संख्याहरूको संख्या। >
< start="1829.794" dur="3.47"> किन यो प्रश्न हो >
< start="1832.463" dur="1.768"> मानिसहरू मलाई सोध्छन्। >
< start="1833.398" dur="3.269"> दुई जवाफ। >
< start="1834.365" dur="6.139"> उत्तर एकले हामीलाई स्वागत छ >
< start="1836.801" dur="5.739"> ग्लोबबाट मानिसहरू। >
< start="1840.638" dur="3.703"> हामी यहाँ आएका मानिसहरू छौं, हामी >
< start="1842.673" dur="3.57"> यहाँ आएका मानिसहरू जो छन् >
< start="1844.475" dur="5.439"> चीन, यहाँबाट आएका इटालीले, >
< start="1846.377" dur="5.105"> सबै जना यहाँबाट आएका को हुन् >
< start="1850.048" dur="3.637"> ग्लोब घुमाउनुहोस्। >
< start="1851.616" dur="6.206"> हामी अन्तर्राष्ट्रिय यात्रीहरू हौं >
< start="1853.818" dur="5.705"> चीन मा को थिए र को थिए >
< start="1857.955" dur="2.269"> इटाली र को कोरिया मा। >
< start="1859.657" dur="3.037"> र कसले यहाँ आयो। >
< start="1860.358" dur="3.803"> र मसँग कुनै शUB्का छैन >
< start="1862.827" dur="3.536"> भाइरस यहाँ धेरै अगाडि थियो >
< start="1864.295" dur="3.737"> हामीलाई थाहा छ >
< start="1866.497" dur="3.003"> र मसँग कुनै शUB्का छैन >
< start="1868.165" dur="4.605"> भाइरस यता धेरै पहिले थिए >
< start="1869.634" dur="6.072"> यो कुनै पनि अर्को राज्यमा थियो। >
< start="1872.904" dur="3.103"> ती मानिसहरू यहाँ आउनुहोस् >
< start="1876.14" dur="6.84"> त्यो पहिलो जवाफ हो। >
< start="1877.842" dur="6.106"> दोस्रो उत्तर हामी नै हो >
< start="1883.113" dur="5.873"> बन्द छन्। >
< start="1884.082" dur="7.473"> किनभने हामी बन्द छौं। >
< start="1889.12" dur="5.538"> हामी भाइरसको बारेमा कुरा गर्छौं र कसरी >
< start="1891.688" dur="8.276"> आईटी डेन्सेज क्षेत्रमा ट्रान्सफर गर्दछ। >
< start="1894.792" dur="5.473"> यो हामीसँगै नै हो >
< start="1900.098" dur="3.436"> बन्द गर्नुहोस् >
< start="1900.398" dur="3.503"> हामी एकसँग बाँच्नुहोस् >
< start="1903.668" dur="0.967"> अर्को। >
< start="1904.035" dur="3.236"> हामी एक नजिक छौं >
< start="1904.769" dur="6.139"> अर्को ठाउँमा। >
< start="1907.404" dur="3.905"> हामी नजिक रहन्छौं >
< start="1911.042" dur="1.601"> समुदाय। >
< start="1911.442" dur="3.336"> हामी एक नजिक छौं >
< start="1912.776" dur="3.804"> बस मा अर्को। >
< start="1914.912" dur="2.302"> हामी एक अर्काको नजिक छौं >
< start="1916.714" dur="1.735"> रेस्टुरेन्ट। >
< start="1917.348" dur="4.537"> हामी एक अर्काको नजिक छौं >
< start="1918.582" dur="7.141"> मूवी थियेटर। >
< start="1922.019" dur="7.008"> र हामीसँग सबैभन्दा धेरै छ >
< start="1925.856" dur="3.538"> बन्द वातावरणहरू >
< start="1929.16" dur="4.037"> COUNTRY >
< start="1929.527" dur="8.274"> र यो भाइरस किन हो >
< start="1933.33" dur="8.542"> संचार गरीएको तरिका। >
< start="1937.935" dur="4.338"> हाम्रो नजिक हामीलाई बनाउँछ >
< start="1942.006" dur="3.169"> VULNERABLE >
< start="1942.406" dur="3.17"> हाम्रो नजिक हामीलाई बनाउँछ >
< start="1945.309" dur="5.038"> VULNERABLE >
< start="1945.709" dur="5.572"> त्यो खाली ठाउँ हामीलाई बनाउँछ >
< start="1950.481" dur="1.969"> VULNERABLE >
< start="1951.415" dur="5.106"> तर यो सत्य हो कि तपाईंको हो >
< start="1952.583" dur="5.839"> सबै भन्दा राम्रो कमजोरी पनि तपाईको हो >
< start="1956.654" dur="4.571"> सबैभन्दा ठूलो शक्ति। >
< start="1958.556" dur="6.172"> र हाम्रो नजिक के हुन्छ >
< start="1961.359" dur="5.405"> हामी को हौं? >
< start="1964.862" dur="6.439"> त्यो के हो न्यू योर्क। >
< start="1966.898" dur="4.871"> हाम्रो नजिक हामीलाई के बनाउँछ >
< start="1971.435" dur="2.402"> विशेष >
< start="1971.903" dur="3.436"> हाम्रो पहुँच, हाम्रो खुलापन, छ >
< start="1973.971" dur="4.338"> हामीलाई विशेष बनाउँछ। >
< start="1975.473" dur="3.903"> आईटीले हामीलाई कस्तो महसुस गर्दछ >
< start="1978.442" dur="3.737"> अर्कोमा जडित। >
< start="1979.51" dur="5.572"> आईटीले हामीलाई के स्वीकार गर्दछ >
< start="1982.313" dur="5.806"> एक अर्को। >
< start="1985.216" dur="6.372"> यो बन्द छ कि बनाउँछ >
< start="1988.252" dur="8.209"> हामी मानिसहरु मानव मानिसहरु हौं। >
< start="1991.722" dur="7.841"> समापन त्यो नयाँ काम हो >
< start="1996.594" dur="3.703"> मानवता जुन मलाई लाग्छ >
< start="1999.696" dur="4.639"> अब ELSE। >
< start="2000.431" dur="7.107"> क्लोसेन्स भनेको के हो हाम्रो >
< start="2004.468" dur="6.807"> समुदायको SENSE। >
< start="2007.672" dur="8.341"> र त्यहाँ एक सज्जन मानिस हो जो म >
< start="2011.408" dur="5.973"> मार्गनिर्देशनको लागि अझै हेर्नुहोस् र >
< start="2016.146" dur="4.004"> नेतृत्व र प्रेरणा। >
< start="2017.515" dur="3.303"> ऊ अरू कुनै ठाउँमा छैन। >
< start="2020.284" dur="3.604"> तिम्रो लागि। >
< start="2020.952" dur="4.771"> ऊ यहाँ छ मेरो लागि। >
< start="2024.021" dur="6.974"> तर उनले भने कि उसले अरू कुरा बढावा दिन्छ >
< start="2025.857" dur="7.807"> र अधिक सुन्दर भन्दा धेरै >
< start="2031.128" dur="3.871"> अरू मानिसहरू पनि छन्। >
< start="2033.798" dur="4.771"> र उनले भनेका एउटा कुरा >
< start="2035.132" dur="6.006"> त्यो यति धेरै को लागी धन्यवाद छ >
< start="2038.703" dur="4.304"> आज, हामी एक एकल मा विश्वास गर्छौं >
< start="2041.271" dur="3.638"> फन्डमेन्टल आईडिया त्यो वर्णन गर्दछ >
< start="2043.14" dur="3.17"> सबैभन्दा उत्तम पाठ्य पुस्तकहरू भन्दा राम्रो >
< start="2045.042" dur="3.437"> कुनै पनि स्पिच जुन म लेख्न सक्थें >
< start="2046.443" dur="2.536"> एक राम्रो सरकार के गर्नुपर्छ >
< start="2048.613" dur="4.137"> BE >
< start="2049.113" dur="5.338"> परिवारको विचार, म्यूच्युलिटी, >
< start="2052.884" dur="4.837"> लाभ र साझा को साझा >
< start="2054.585" dur="5.372"> सबै को राम्रो लागि BURDENS। >
< start="2057.855" dur="6.773"> एक अर्को पेन महसुस। >
< start="2060.091" dur="6.806"> एक अर्काको आशीर्वाद साझेदारी गर्दै। >
< start="2067.03" dur="5.506"> रेस वा सेक्समा सम्मान बिना >
< start="2068.632" dur="5.172"> वा भूगोल वा राजनीतिक >
< start="2072.67" dur="2.368"> AFFILIATION। >
< start="2073.938" dur="4.571"> त्यो नयाँ काम हो। >
< start="2075.172" dur="7.14"> आईटी त्यो बन्द छ, त्यो >
< start="2078.642" dur="6.406"> परिवारको समुदाय, समुदाय को। >
< start="2082.446" dur="2.903"> त्यो नयाँ न्यूयोर्कले के बनाउँदछ >
< start="2085.182" dur="3.504"> यार्क। >
< start="2085.482" dur="4.171"> र त्यो हामीलाई के बनाउँछ >
< start="2088.819" dur="3.571"> यहाँ VULNERABLE। >
< start="2089.787" dur="5.505"> तर यो पनि त्यस्तै हो कि क्लोसेन्स >
< start="2092.523" dur="5.706"> र त्यो कनेक्शन र त्यो >
< start="2095.425" dur="5.039"> मानवता र त्यो साझा गर्ने >
< start="2098.362" dur="4.771"> हाम्रो सबैभन्दा ठूलो शक्ति हो। >
< start="2100.598" dur="5.505"> र त्यो के हुन गइरहेको छ >
< start="2103.266" dur="5.773"> दिनको अन्त्यमा OVERCOME। >
< start="2106.236" dur="4.805"> म तपाईंलाई प्रमिस गर्छु। >
< start="2109.173" dur="2.669"> म कसरी नयाँ यर्कर्सहरू छन् भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ >
< start="2111.175" dur="2.436"> जवाफ दिँदै। >
< start="2111.976" dur="2.835"> म कसरी नयाँ यार्कर्स छन् हेर्न सक्नुहुन्छ >
< start="2113.744" dur="4.672"> एक अर्को व्यवहार गर्दै। >
< start="2114.945" dur="3.871"> म ,000,००० मानसिक स्वास्थ्य देख्छु >
< start="2118.549" dur="2.736"> भोलन्टर्स। >
< start="2118.949" dur="3.77"> म 40०,००० स्वास्थ्य हेरचाह देख्छु >
< start="2121.418" dur="2.703"> मजदुरहरू स्ट्यापि UP अप। >
< start="2122.853" dur="2.336"> मलाई विक्रेताहरु कलिंग साइन इन गर्नुहोस् >
< start="2124.254" dur="2.336"> म मद्दत गर्न सक्छु भन्न। >
< start="2125.323" dur="3.636"> त्यो नयाँ काम हो। >
< start="2126.724" dur="8.408"> त्यो नयाँ काम हो। >
< start="2129.093" dur="6.473"> र त्यो मेरो साथी हो >
< start="2135.265" dur="1.135"> IN-DEFEATABLE। >
< start="2135.699" dur="2.87"> र म केही तरिकामा खुशी छु >
< start="2136.533" dur="4.071"> हामी यस अवस्थाको साथ पहिलो छौं >
< start="2138.702" dur="3.837"> हामी ओभरकोम गर्नेछौं। >
< start="2140.738" dur="3.069"> र हामी अर्को देखाउने छौं >
< start="2142.672" dur="3.204"> समुदायहरू यस देशलाई पार गर्नुहोस् >
< start="2143.94" dur="4.538"> यो कसरी गर्ने। >
< start="2146.01" dur="5.305"> हामी तिनीहरूको लागि त्यहाँ हुनेछौं। >
< start="2148.612" dur="7.174"> हामी उनीहरूको लागि हामी त्यहाँ हुन चाहन्छौं। >
< start="2151.448" dur="7.574"> र हामी प्रत्येकको लागि त्यस्तै हुनेछौं >
< start="2155.92" dur="4.404"> अरू जस्तो हामी सधै हुन्छौं। >
< start="2159.156" dur="6.039"> कुनै प्रश्न? >
< start="2160.458" dur="9.876"> >> राज्यले कसले निर्णय गर्छ >
< start="2165.329" dur="5.739"> प्राथमिकता हुन्छ जब यो आउँछ >
< start="2170.468" dur="3.102"> वेंटलिटरहरू? >
< start="2171.202" dur="5.605"> >> हामीसँग कुनै एन्टिसेपिकेसन छैन >
< start="2173.703" dur="5.139"> भेन्ट्रीलाई प्राथमिकतामा राख्दै >
< start="2176.94" dur="2.803"> USAGE। >
< start="2178.976" dur="2.035"> हाम्रो लक्ष्य एक भेन्टिल्टर छ >
< start="2179.877" dur="3.37"> जो कोहीलाई आवश्यक छ। >
< start="2181.145" dur="6.139"> >> तपाईंले हामीलाई देखाउनुभयो कि नम्बर >
< start="2183.38" dur="5.306"> देखाउनुहोस् कि तपाईं अनुकूल हुनुहुन्छ >
< start="2187.417" dur="2.136"> १ 15,००० मा र तपाइँ तपाइँलाई मूल्याAT्कन गर्नुहुन्छ >
< start="2188.819" dur="2.903"> ,000०,००० को आवश्यकता छ। >
< start="2189.686" dur="3.237"> कति NITTY-GRITTY प्रश्न, >
< start="2191.855" dur="2.603"> यी वेंटलरहरू कहाँ छन् >
< start="2193.057" dur="3.303"> फेमा जाँदैछु। >
< start="2194.592" dur="3.203"> तपाईं कुनै पनि कमेन्ट प्राप्त गर्नुभयो >
< start="2196.493" dur="3.07"> सेतो घर उनीहरूले गर्नेछन् >
< start="2197.928" dur="4.905"> SE००० भन्दा बढि पठाउनुहोस् >
< start="2199.696" dur="5.573"> उनीहरूले पहिले नै कमेटी दिएका छन्? >
< start="2202.966" dur="4.005"> र के पुग्न योजना छ? >
< start="2205.402" dur="2.203"> त्यो नम्बर जसरी तपाईं नै हुनुहुन्छ >
< start="2207.104" dur="4.337"> बढाइएको अस्पताल बेडहरू? >
< start="2207.738" dur="5.172"> >> त्यो राम्रो प्रश्न हो। >
< start="2211.575" dur="3.003"> पहिलो हामी भेन्टिएटरहरु हौं >
< start="2213.043" dur="3.471"> हामी भित्र पुग्छौं >
< start="2214.711" dur="4.505"> स्टकपाईल र हामी जवाफ दिन्छौं >
< start="2216.647" dur="4.17"> हामीलाई आवश्यक छ त्यस्तै स्टकपाइल। >
< start="2219.35" dur="2.135"> लिटरली नै आवश्यकता छ >
< start="2220.951" dur="3.27"> आधार, सही? >
< start="2221.619" dur="4.237"> यदि एक अस्पतालमा कल हुन्छ र >
< start="2224.354" dur="4.405"> हामी भन्छौं हामी बढी गर्छौं, हामी छौं >
< start="2225.989" dur="5.439"> जवाफ दिनको लागि स्थितिमा हुनुहोस्। >
< start="2228.893" dur="4.17"> बेडको वृद्धि छ >
< start="2231.561" dur="3.17"> हाम्रो नियन्त्रण संग, ठीक? >
< start="2233.197" dur="2.97"> यस राज्यमा खाटहरू छन्। >
< start="2234.865" dur="2.603"> तिनीहरू अस्पतालमा बेडहरू छैनन् >
< start="2236.3" dur="2.169"> तपाइँ कसरी फिगर गर्न सक्नुहुन्छ >
< start="2237.601" dur="2.402"> अस्पताल बेडहरूमा उनीहरूलाई सहयोग गर्नुहोस् >
< start="2238.602" dur="3.037"> र तपाइँ कसरी फिगर गर्न सक्नुहुन्छ >
< start="2240.136" dur="3.704"> तिनीहरुमा पहुँच प्राप्त गर्न, तर हामी >
< start="2241.772" dur="4.972"> बेडहरू छन्। >
< start="2243.974" dur="4.004"> त्यसोभए यो उपस्कर हो >
< start="2246.877" dur="2.937"> अपरेसनल चुनौती, कसरी गर्नुहोस् >
< start="2248.111" dur="2.703"> तपाईं एक DORM रूम भित्र A >
< start="2249.947" dur="2.669"> अस्पताल बेड। >
< start="2250.948" dur="2.602"> हामी कसरी अस्पताल बनाउन सक्छौं? >
< start="2252.749" dur="2.436"> जाभिस केन्द्र। >
< start="2253.684" dur="4.771"> भेन्टेलरहरू फरक छन्। >
< start="2255.319" dur="4.604"> हामी उनीहरूसँग छैनौं। >
< start="2258.589" dur="2.969"> संघीय सरकारले गर्दैन >
< start="2260.056" dur="5.439"> उनीहरूसँग गर्नुहोस्। >
< start="2261.692" dur="4.104"> कुनै एक स्टकपाइल छ >
< start="2265.629" dur="1.735"> यी। >
< start="2265.929" dur="2.67"> संघीय सरकार छ >
< start="2267.497" dur="2.603"> हामीले उनीहरूलाई त्यहि तरीकाले पाउँदछौं >
< start="2268.732" dur="4.037"> तिनीहरूलाई प्राप्त गर्नका लागि छ। >
< start="2270.234" dur="5.038"> म सेतो हाउसको साथ काम गर्दैछु >
< start="2272.903" dur="4.971"> एक्वाइरको सिर्जनात्मक मार्गहरूमा >
< start="2275.406" dur="4.838"> उनीहरु, र्याम्पमा कम्पनीहरु पाउने >
< start="2280.377" dur="7.374"> अन्य मशीनहरू पुनःप्रदर्शन गर्नुहोस्, यो >
< start="2283.38" dur="5.339"> रोलिंग DepPLOYMENT मेथोडोलोजी, >
< start="2287.885" dur="4.971"> तर तिनीहरूको कुनै पनि छैन। >
< start="2288.853" dur="5.305"> त्यहाँ कुनै मेडिकल स्टॉक छैन >
< start="2292.99" dur="3.103"> वाशिंगटन त्यो जादूगर हुन सक्छ >
< start="2294.291" dur="3.237"> तिनीहरूलाई प्रकट गर्नुहोस्। >
< start="2296.227" dur="3.77"> >> २०१ 2015 मा एउटा रिपोर्ट थियो >
< start="2297.661" dur="4.137"> जहाँ राज्य सिफारिश वा A >
< start="2300.13" dur="2.903"> टास्क फोर्स सिफारिश नयाँ नयाँ >
< start="2301.932" dur="1.502"> यार्क यो बढाउनु पर्छ >
< start="2303.167" dur="2.101"> स्टकपाइल। >
< start="2303.567" dur="2.002"> कुनै कारण त्यो थिएन >
< start="2305.735" dur="2.47"> >> जिमी, यो सही छैन >
< start="2307.104" dur="2.535"> र तपाइँ यो जान्नुहुन्छ। >
< start="2308.339" dur="4.57"> IT मा तथ्य परीक्षकहरू पढ्नुहोस्। >
< start="2309.773" dur="6.34"> त्यहाँ एक सल्लाहकार समिति थियो >
< start="2313.043" dur="7.708"> जीवन र कानून भनेको भनेको थियो >
< start="2316.247" dur="11.878"> २०१ 2015 मा एक चार्ट जुन तपाइँले भन्नुभयो >
< start="2320.885" dur="8.174"> १ 18 १18 स्पानिश फ्लु थियो >
< start="2328.258" dur="1.669"> प्यान्डिक, तपाइँलाई आवश्यक छ X नम्बर >
< start="2329.192" dur="5.172"> वेंटलिटरहरूको। >
< start="2330.06" dur="5.906"> संयुक्त राज्यमा कुनै राज्य छैन >
< start="2334.498" dur="4.237"> तथ्या .्कहरू कि VENTILAORS >
< start="2336.099" dur="4.104"> स्पानिश फ्लु महामारीको लागि। >
< start="2338.869" dur="3.737"> संघीय सरकार थिएन >
< start="2340.337" dur="2.936"> १ 18 १। को लागि भेन्टिल्टरहरू किन्नुहोस् >
< start="2342.739" dur="3.204"> स्पानिश फ्लु महामारी। >
< start="2343.407" dur="4.871"> विश्व बगैंचामा कुनै पनि छैन >
< start="2346.076" dur="8.108"> A को लागि तयारीमा भेन्टिलेटरहरू >
< start="2348.412" dur="7.541"> १ 18 १। स्पानिश फ्लो प्यान्डिक। >
< start="2354.318" dur="3.503"> >> तपाईको केस संख्या >
< start="2356.086" dur="2.102"> रिपोर्टहरू छन्, कति छ >
< start="2357.955" dur="2.603"> पुन: समाधान भयो? >
< start="2358.322" dur="4.437"> महिलाको उदाहरणका लागि >
< start="2360.691" dur="4.972"> इरानबाट, उनी अब सफा छ र >
< start="2362.892" dur="4.038"> के तपाईं अझै रिपोर्टि C केसहरू हुनुहुन्छ >
< start="2365.796" dur="3.603"> सायद उनीहरूले समाधान गरे? >
< start="2367.064" dur="4.972"> >> छोटो उत्तर हो हो। >
< start="2369.533" dur="3.303"> के तपाईंलाई थाहा छ, DR जकर, द >
< start="2372.169" dur="2.836"> संख्या कसले समाधान भयो? >
< start="2372.97" dur="5.505"> >> हामी अवरोधहरू र शिकार हौं >
< start="2375.139" dur="4.737"> बाँचेकाहरूबाट >
< start="2378.609" dur="2.502"> अस्पताल र ती व्यक्तिहरु >
< start="2380.01" dur="2.669"> समाधान गरिएको छ र त्यहाँ धेरै छन् >
< start="2381.245" dur="3.403"> कहिले पनि कहिले चाहिँ अन्य व्यक्तिहरू >
< start="2382.813" dur="3.303"> अस्पताल र हामी आउँछन् >
< start="2384.782" dur="4.403"> तपाइँलाई सटीक लिन प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ >
< start="2386.249" dur="5.673"> त्यसमा नम्बर >
< start="2389.319" dur="4.138"> >> तर तपाईं परिवर्तन गर्दै हुनुहुन्छ >
< start="2392.055" dur="3.571"> क्रिटेरिया र काउन्टी हामीलाई बताउँछ >
< start="2393.59" dur="4.071"> यदि नियमहरू सफा छन् भने, >
< start="2395.759" dur="2.503"> तिनीहरूले परिवर्तन गरेका छन् - >
< start="2397.794" dur="1.435"> >> ठीक। >
< start="2398.395" dur="2.002"> >> तपाईं के बारेमा कुरा गर्न सक्नुहुन्छ >
< start="2399.362" dur="3.17"> पछाडि? >
< start="2400.531" dur="3.67"> >> ठीक छ, हामी सीडीसीको अनुसरण गर्दैछौं >
< start="2402.666" dur="4.037"> दिशानिर्देश र सिफारिसहरू >
< start="2404.334" dur="3.871"> सात दिन पछि, यदि तपाईं >
< start="2406.837" dur="2.368"> सकारात्मक र सात पछि >
< start="2408.338" dur="2.836"> सकारात्मक र जस्तो हुनु पर्ने दिनहरू >
< start="2409.339" dur="3.403"> तपाई 72२ भन्दा बढि हुनुहुन्छ >
< start="2411.307" dur="7.608"> प्रतीकहरू बिना HOURS, तब तपाईं >
< start="2412.876" dur="8.575"> गृहमा पछाडि जान सक्नुहुन्छ। >
< start="2419.049" dur="2.703"> >> र यो उत्तम डाटा हो, >
< start="2421.585" dur="1.902"> ल? >
< start="2421.885" dur="5.472"> त्यो यूहन्ना हप्किन्स हो। >
< start="2423.621" dur="4.437"> यो हरेक मामला चीन हो। >
< start="2427.491" dur="2.803">5435,००० >
< start="2428.192" dur="3.536"> 19,000 मृत्यु र फेरि, र म >
< start="2430.427" dur="2.736"> तपाईं DOLLARS गर्न सक्नुहुन्छ >
< start="2431.862" dur="3.604"> डोनट्स, तपाईलाई यस्तै लाग्छ >
< start="2433.297" dur="3.636"> १ ,000,०००, सेनियर नागरिकहरू, >
< start="2435.599" dur="3.47"> मिश्रित इम्मुन प्रणाली, ईटी >
< start="2437.067" dur="2.536"> CETERA। >
< start="2439.203" dur="0.734"> सिफारिसहरू, १०,०००। >
< start="2439.737" dur="1.734"> ठीक? >
< start="2440.07" dur="3.837"> राउली २%%। >
< start="2441.605" dur="5.339"> END००,००० पेन्ड गर्दै। >
< start="2444.041" dur="5.772"> तर हो, सिफारिसहरू हुन् >
< start="2447.077" dur="5.973"> सिफारिसहरू। >
< start="2449.947" dur="6.072"> तपाईं यो पाउनुहुन्छ - मानिसहरू म जान्दछु, >
< start="2453.183" dur="4.671"> तिनीहरू दुई हप्ताको लागि गृहमा रहन्छन्, >
< start="2456.152" dur="3.504"> र ती नकारात्मक छन्। >
< start="2457.988" dur="3.17"> तपाईं दुई मा नकारात्मक परीक्षण गर्न सक्नुहुन्छ >
< start="2459.79" dur="3.27"> हप्ता, तीन हप्तामा, तपाईं सक्नुहुन्छ >
< start="2461.291" dur="2.369"> एक हप्ता पछि नकारात्मक परीक्षण गर्नुहोस् >
< start="2463.193" dur="3.27"> तपाईंसँग यो छ। >
< start="2463.794" dur="4.504"> त्यो भस्ट हुन गइरहेको छ >
< start="2466.596" dur="2.836"> मानिसहरुको बढी संख्या। >
< start="2468.432" dur="2.535"> सबैभन्दा ठूलो नम्बर जब यो छ >
< start="2469.566" dur="2.903"> सम्पन्न भयो र हामी वास्तवमै पछाडि जान सक्छौं >
< start="2471.101" dur="3.304"> र परीक्षण, सबैभन्दा ठूलो नम्बर हो >
< start="2472.602" dur="4.071"> मान्छे हुन जो यो थियो >
< start="2474.538" dur="19.453"> डब्ल्यूएचओ को समाधान को जो उनलाई थाहा छैन >
< start="2476.807" dur="17.184"> यो थियो। >
< start="2537.634" dur="4.271"> >> हामी अधिक आईसीयू बिडहरू सिर्जना गर्न सक्दछौं >
< start="2540.137" dur="4.07"> घरमा वेंटलिटरहरूसँग। >
< start="2542.039" dur="6.573"> त्यसो भए हामीसँग १ 14,००० वेंटलिटरहरू छन्। >
< start="2544.341" dur="9.442"> यदि हामी आज गर्न चाहन्छौं भने हामी सक्दछौं >
< start="2548.746" dur="7.173"> यदि १ V,००० भाँडो गरिएको बिडहरू बनाउनुहोस् >
< start="2553.917" dur="2.769"> हामी फेरि बढ्दै गयौं >
< start="2556.053" dur="1.501"> क्षमता, CORRECT? >
< start="2556.82" dur="3.069"> >> सही। >
< start="2557.688" dur="3.97"> त्यो शर्त आईसीयू बेडहरूमा छ >
< start="2560.423" dur="2.269">F $ !, dOI LIVING RIGHT>
< start="2561.792" dur="3.203"> अब बिभिन्न छ। >
< start="2562.826" dur="4.237"> A को साथ एक रिकभरि कोठा >
< start="2565.129" dur="6.806"> भेन्टिलेटर एक आईसीयू बेड छ। >
< start="2567.197" dur="7.24"> ठीक त्यस्तै संख्याहरू >
< start="2572.069" dur="2.669"> तर हामीसँग ती जानकारी हुन् >
< start="2574.571" dur="7.908"> स्वागत छ। >
< start="2574.871" dur="12.579"> >> राज्य मात्र छ >
< start="2582.613" dur="7.44"> हामी संग योजना बनाउन छ >
< start="2590.487" dur="4.738">१.२ लाख जोड्नुहोस् >
< start="2592.79" dur="3.903"> स्वास्थ्य देखभाल कामदारहरु आउन >
< start="2595.359" dur="4.637"> न्यू योर्क राज्य र तपाइँ तपाइँ देख्नुहुनेछ >
< start="2596.827" dur="5.138"> यी संख्या मध्ये धेरै प्रस्तुत >
< start="2600.13" dur="3.303"> आज विस्तार रूपमा विशेष रूपमा >
< start="2602.099" dur="3.069"> कलहरू बाहिर गइरहेका छन्। >
< start="2603.567" dur="5.672"> यो राज्यमा बस छैन। >
< start="2605.302" dur="8.007"> हामी पनि बाहिर स्टेट को लागी सोधे >
< start="2609.373" dur="7.307"> RETIREES र स्वास्थ्य देखभाल थियो >
< start="2613.443" dur="4.805"> कामदार र तिनीहरूको लागी व्यवस्था >
< start="2616.814" dur="3.703"> यस क्षेत्रमा आउन। >
< start="2618.382" dur="9.475"> >> त्यहाँ प्रतिस्पर्धा क्षेत्रहरू थिए। >
< start="2620.651" dur="7.94"> >> पजी पछाडिपट्टि मात्र >
< start="2627.991" dur="3.203"> प्रश्न >
< start="2628.725" dur="5.272"> >> के तपाईं रिपोर्टहरू हेर्दै हुनुहुन्छ >
< start="2631.328" dur="5.004"> पहिले नै ती प्रतिवेदन गर्दै छ? >
< start="2634.131" dur="9.509"> >> म ती संख्याहरूमा प्रतिक्रिया गर्दै छु >
< start="2636.466" dur="11.278"> त्यो हामीसँग छ। >
< start="2643.774" dur="4.404"> र साथ आईसीयू बेडको संख्या >
< start="2647.878" dur="2.268"> भेन्टिलेटरहरू। >
< start="2648.311" dur="5.372"> त्यो एक नम्बर >
< start="2650.28" dur="6.473"> यदि तपाइँ भेन्टिलरहरू हामी ल्याउनुहुन्छ >
< start="2653.817" dur="7.574"> हातमा छन् र ती जोड्नुहोस् >
< start="2656.887" dur="7.44"> बेडहरू जुन नम्बर जान्छ। >
< start="2661.525" dur="7.874"> हामी त्यसलाई सक्रिय पार्न सक्छौं। >
< start="2664.461" dur="6.706"> >> र स्टक पाइप। >
< start="2669.533" dur="2.902"> यहाँ स्टक गर्नुहोस्। >
< start="2671.301" dur="4.638"> त्यहाँ बहु मल्टि पाइल्सहरू >
< start="2672.569" dur="5.939"> हामी के गयौं। >
< start="2676.073" dur="4.303"> हामीसँग मल्टिपल स्टॉकहरू छन्। >
< start="2678.642" dur="2.535"> हामीसँग बहुमा राखिएको थियो >
< start="2680.51" dur="2.135"> स्टक पाइल्स। >
< start="2681.311" dur="2.602"> हामी शहर जान्छौं। >
< start="2682.779" dur="4.104"> हामीसँग स्टक पाइप लामो छ >
< start="2684.047" dur="5.572"> ISland.íp ($ oH # & W ■) >
< start="2687.017" dur="5.438"> र अल्बानी मा स्टक पाइप र >
< start="2689.753" dur="5.071"> मेरो आधारमा स्टक पाइप। >
< start="2692.589" dur="4.538"> >> बाहिर रोलिंग। >
< start="2694.958" dur="5.038"> >> हामीसँग आईसीयू थियो। >
< start="2697.261" dur="3.903"> हामीसँग भेन्टिलरहरू थिए >
< start="2700.13" dur="2.369"> स्टक पाइल्स। >
< start="2701.298" dur="1.568"> हामी उनीहरूलाई भेट्दैनौं >
< start="2702.633" dur="1.701"> अस्पताल। >
< start="2703" dur="6.606"> हामी एक अस्पताल कल गरिएको छैन >
< start="2704.468" dur="6.105"> मलाई भन्नुहोस् कि मैले वेंटिल्ट आवश्यक छ >
< start="2709.74" dur="2.201"> BED >
< start="2710.707" dur="3.637"> >> प्रत्यायोजित हुँदै। >
< start="2712.075" dur="3.336"> तिनीहरू डेपीलोइ गर्दै छन् >
< start="2714.478" dur="6.673"> फ्रन्ट लाइनहरु। >
< start="2715.845" dur="6.307">■ भागहरू>
< start="2721.285" dur="10.843"> अस्पताल। >
< start="2722.286" dur="13.913"> >> तपाईं मलाई सुधार गर्न सक्नुहुन्छ। >
< start="2732.262" dur="5.906"> म विश्वास गर्दिन उनीहरू जाँदैछन् >
< start="2736.333" dur="5.004"> DepPLOYED YET। >
< start="2738.302" dur="5.571"> र तिनीहरूले दुई उद्देश्यहरू खोज्छन्। >
< start="2741.471" dur="5.639"> तपाईलाई नयाँ बेडहरूको लागि स्टाफ चाहिन्छ। >
< start="2744.007" dur="6.306"> अब तपाइँले 200 लाई गर्न लाग्नु पर्छ >
< start="2747.244" dur="6.239"> बेड वा तपाईं एक अस्पताल छ कि >
< start="2750.447" dur="5.905"> कामदारहरूको एक छोटो छोटो छ >
< start="2753.617" dur="4.737"> घण्टा र बिमार कारण। >
< start="2756.486" dur="5.439"> तर जिम, हामी विश्वास गर्दैनौं >
< start="2758.488" dur="4.838"> अब उद्धार परिणामहरू। >
< start="2762.059" dur="3.703"> >> त्यो सही छ। >
< start="2763.46" dur="5.705"> >> ती पदहरूमा ध्यान दिनुहोस् >
< start="2765.896" dur="6.239"> Regulations समावेश सहित >
< start="2769.299" dur="3.27"> मेडिकल मालप्यारा र >
< start="2772.269" dur="1.434"> नियमन। >
< start="2772.702" dur="1.702"> >> हामी यी ISSUES मा हेर्दै छौं >
< start="2773.837" dur="2.002"> जस्तो राम्रो छ। >
< start="2774.538" dur="5.972"> त्यहाँ केहि विचारहरू छन् >
< start="2775.973" dur="6.572"> हामी याद गरिएकाहरू जस्तै उठेका छौं >
< start="2780.644" dur="4.003"> अघिल्लो प्रेस कन्फरेन्सहरूमा। >
< start="2782.679" dur="3.203"> हामी हाम्रो नियम र हेर्नुपर्छ >
< start="2784.781" dur="2.335"> नियम र एडेप्ट >
< start="2786.016" dur="6.606"> अनुरुप यति हामी गर्न गइरहेका छौं >
< start="2787.25" dur="6.74"> त्यो ठीक छ। >
< start="2792.756" dur="3.269"> मसँग फोन थियो >
< start="2794.124" dur="3.703"> अस्पताल प्रशासकहरू। >
< start="2796.159" dur="4.371"> स्वास्थ्य विभाग - को >
< start="2797.961" dur="5.305"> स्वास्थ्य विभाग छ >
< start="2800.664" dur="4.103"> बहु भागहरू भाग्नको लागि >
< start="2803.4" dur="3.303"> संयुक्त राज्यमा उत्तम स्वास्थ्य प्रणाली >
< start="2804.901" dur="6.573"> अमेरिकाको तथ्या .्क। >
< start="2806.837" dur="6.139"> र ती विनियोजनहरू यो बनाउँछन् >
< start="2811.608" dur="5.472"> नियमहरू समापन गर्न सक्दछन् >
< start="2813.11" dur="8.207"> खर्चको मार्गमा पाउनुहोस् र >
< start="2817.214" dur="6.639"> सुविधा र परिचालन >
< start="2821.451" dur="3.303"> हामी यस मामलामा भन्यौं हामी छौं >
< start="2823.987" dur="2.802"> पुनः भेट्न जाँदै। >
< start="2824.888" dur="4.17"> विनियमन धेरै तिनीहरू >
< start="2826.923" dur="4.037"> स्टाफ अप गर्न सक्नुहुन्छ, तिनीहरू बढ्न सक्दछन् >
< start="2829.192" dur="4.304"> क्षमता, तपाईंलाई थाहा छ, तपाईंले A लाई सोध्नुभयो >
< start="2831.094" dur="5.405"> डुबल क्षमताको लागि अस्पताल। >
< start="2833.63" dur="3.303"> हामी स्पेस को सबै प्रकारको छ >
< start="2836.633" dur="2.002"> नियमहरू। >
< start="2837.066" dur="10.077"> त्यसोभए तपाईंले उनीहरूको लागि लचिलोपन आवश्यक छ >
< start="2841.237" dur="6.173">हामी NG81BI तिनीहरूलाई के गर्नुहोस् >
< start="2847.277" dur="6.139"> गर्नुहोस् >
< start="2847.544" dur="8.608"> >> म कन्फ्युस भएको छु। >
< start="2853.55" dur="5.572"> यदि मलाई न्यू योर्कको साथ काम गर्न आवश्यक छ भने >
< start="2856.286" dur="3.237"> शहर तर रिसाइरहरू नयाँ छन् >
< start="2859.256" dur="4.47"> यार्क सिटी। >
< start="2859.656" dur="5.205"> >> तपाईं एक बिन्दु हुन सक्नुहुन्छ। >
< start="2863.86" dur="2.436"> >> न्यू योर्क शहर पहिले नै छ >
< start="2864.995" dur="4.037"> तिनीहरूको आफ्नैमा गर्दै। >
< start="2866.43" dur="6.105"> हामी न्यू योर्क शहर 77 77 मा बोलेका छौं >
< start="2869.166" dur="3.703"> एक दिन टाइम्स >
< start="2872.669" dur="5.538"> >>। 78। >
< start="2873.002" dur="6.34"> >> होइन। >
< start="2878.341" dur="2.669"> >> म सक्छु। >
< start="2879.476" dur="1.868"> तपाइँ एक कONG्ग्रेस हुन आवश्यक छ >
< start="2881.144" dur="2.969"> PERSON। >
< start="2881.477" dur="4.939"> तपाइँले सेन्टर हुन आवश्यक छ, मँ छु >
< start="2884.247" dur="4.438"> उनीहरूको साथ कुराकानी गरियो। >
< start="2886.55" dur="2.536"> म वाशिंगटनलाई बुझ्दछु >
< start="2888.819" dur="3.035"> BUAAUCRACY। >
< start="2889.219" dur="4.537"> म त्यहाँ थिए। >
< start="2891.988" dur="2.903"> तर मैले पास हुँदा बिलहरू राखें >
< start="2893.89" dur="3.003"> सचिव। >
< start="2895.025" dur="4.237"> मलाई थाहा छ कती गाह्रो छ तर म पनि >
< start="2897.027" dur="2.536"> कसरी थाहा पाउँदछौ कसरी स्ट्याकहरू छन् >
< start="2899.396" dur="5.038"> यहाँ >
< start="2899.696" dur="6.172"> तपाईं हराएको मा हेर्नुहोस् >
< start="2904.568" dur="2.201"> अन्वेषण गर्नुहोस्, तपाईलाई के मान्छे भयो >
< start="2906.002" dur="3.77"> मेरो बारेमा कुरा गर्दै। >
< start="2906.903" dur="5.105"> तपाईं कसरी राज्य बजट गर्नुहुन्छ >
< start="2909.906" dur="3.637"> राजस्वमा नाटक हराउनेसँग। >
< start="2912.142" dur="2.936"> ऊ भन्दै थियो >
< start="2913.677" dur="3.569"> फेडरल सरकार जाँदै छ >
< start="2915.212" dur="4.103"> एउटा उत्तेजक प्याकेजलाई पास गर्नुहोस् >
< start="2917.38" dur="3.236"> उद्धारहरू थप फन्डिंग >
< start="2919.449" dur="1.668"> राज्य सरकारहरू। >
< start="2920.75" dur="1.468"> ल। >
< start="2921.251" dur="7.907"> यहाँ प्याकेज छ। >
< start="2922.352" dur="9.275"> IT US $ 8. B बिल दिन्छ। >
< start="2929.292" dur="2.702"> होल जति IGH १$ छ >
< start="2931.761" dur="2.236"> बिलियन >
< start="2932.128" dur="6.907"> >> तपाईं कसरी एक $ १ B बिलियन प्लग गर्नुहुन्छ >
< start="2934.131" dur="8.174"> O.8 बिलियनसहित होल? >
< start="2939.169" dur="5.972"> तपाईं गर्नुहुन्न। >
< start="2942.439" dur="3.937"> >> तपाईं कसरी जवाफ दिनुहुन्छ >
< start="2945.275" dur="2.368"> मानसिकता र फिलोसफी त्यो >
< start="2946.51" dur="3.369"> उपचार त्यो भन्दा खराब छ >
< start="2947.777" dur="3.403"> DISEASE र सिफारिस द्वारा >
< start="2950.013" dur="3.436"> राष्ट्रपति चाहानुहुन्छ कि ऊ चाहन्छ >
< start="2951.314" dur="2.502"> देश द्वारा खोल्नको लागि >
< start="2953.583" dur="9.009"> ईस्टर? >
< start="2953.95" dur="9.543"> >> हेर्नुहोस्, म योको भाग विश्वास गर्दछु >
< start="2962.726" dur="2.502"> भाषा, ठीक? >
< start="2963.627" dur="3.369"> >> NOBODY यो भन्दैन >
< start="2965.362" dur="1.968"> अर्थव्यवस्था राख्नको लागि SUSTAINABLE >
< start="2967.13" dur="3.77"> बन्द भयो। >
< start="2967.463" dur="9.276"> >> यो सक्दो छैन। >
< start="2971.034" dur="8.341"> हामी पाउँदछौं। >
< start="2976.873" dur="4.137"> त्यो .१, .२। >
< start="2979.509" dur="3.837"> सबै जना सहमत छन् म मा विश्वास गर्छु >
< start="2981.144" dur="3.703"> यो राज्य। >
< start="2983.48" dur="9.175"> हामी सबै गर्न सक्छौं हामी गर्न सक्छौं >
< start="2984.981" dur="11.044"> एक जीवन सुरक्षित गर्न। >
< start="2992.789" dur="6.373"> यी भर्नरपेबल मानिसहरू थिए। >
< start="2996.159" dur="4.537"> तिनीहरू सोमेटाइम मर्न थियो >
< start="2999.296" dur="5.505"> जे होस्। >
< start="3000.83" dur="5.772"> त्यसो गरौं चलाउनुहोस्। >
< start="3004.935" dur="2.368"> म कुनै पनि अमेरिकी विश्वास गर्दिन >
< start="3006.736" dur="2.669"> विश्वास गर्छौं। >
< start="3007.437" dur="3.303"> मलाई थाहा छ नयाँ योर्कर्सलाई विश्वास छैन >
< start="3009.539" dur="3.136"> त्यो र सरकारको रूपमा >
< start="3010.874" dur="6.139"> न्यू योर्कको राज्य म स्विकार गर्न सक्छु >
< start="3012.809" dur="7.24"> तपाईले मलाई त्यो गर्नुहुन्न। >
< start="3017.147" dur="3.303"> त्यसोभए तपाईंले दुई पार्लियाल गर्नुभयो >
< start="3020.183" dur="1.601"> THOUGHTS। >
< start="3020.583" dur="2.87"> तपाईंसँग अर्थतन्त्र हुनु पर्छ >
< start="3021.918" dur="3.003"> चलिरहेको छ र तपाईं संरक्षण गर्न छ >
< start="3023.587" dur="6.239"> हरेक जीवन जुन तपाईं सक्नुहुन्छ। >
< start="3025.055" dur="12.145"> म विश्वास गर्दछु यो थप परिष्कृत छ >
< start="3029.959" dur="8.308"> रणनीति अब हामी कुराकानी गरिरहेका छौं >
< start="3037.334" dur="2.935"> बारेमा। >
< start="3038.401" dur="5.505"> मलाई लाग्दैन कि यो बिनरी हो। >
< start="3040.403" dur="5.605"> मलाई लाग्दैन कि तपाईं तल झार्नुहुन्छ >
< start="3044.04" dur="5.172"> पूर्ण आर्थिक र खुला छ >
< start="3046.142" dur="3.404"> पूर्ण सोसाइटी व्यवसाय को रूपमा >
< start="3049.346" dur="1.701"> USUAL >
< start="3049.679" dur="6.006"> हामी अहिले त्यो सिक्यौं >
< start="3051.181" dur="8.141"> जोखिम कोटिकोट। >
< start="3055.819" dur="6.939"> युवा मानिसहरुमा जोखिम कम छ। >
< start="3059.456" dur="5.104"> मानिसहरु लाई भाइरस छ र >
< start="3062.892" dur="3.136"> समाधान कम जोखिम। >
< start="3064.694" dur="3.069"> भित्रबाट ल्याईको अर्थव्यवस्था सुरू गर्नुहोस् >
< start="3066.162" dur="4.871"> युवाहरू कम छन् कि >
< start="3067.897" dur="4.037"> जोखिममा र चालु सुरु गर्नुहोस् >
< start="3071.167" dur="4.638"> त्यस तरीकाले मेशिन गर्नुहोस्। >
< start="3072.068" dur="6.373"> आर्थिक पुनः सुरु गर्नुहोस् >
< start="3075.939" dur="4.137"> त्यो बाटो। >
< start="3078.575" dur="4.604"> जो सबै भन्दा राम्रो सार्वजनिक हो >
< start="3080.21" dur="4.537"> स्वास्थ्य रणनीति। >
< start="3083.313" dur="2.035"> एक जवान व्यक्ति बाहिर गइरहेको छ >
< start="3084.881" dur="5.739"> पार्क गर्न। >
< start="3085.482" dur="10.043"> BASKETBALL खेल्दै छैन। >
< start="3090.754" dur="6.873"> र त्यसपछि पछाडि आउँदैछ >
< start="3095.659" dur="3.236"> HOUSE त्यो एक सार्वजनिक होईन >
< start="3097.761" dur="3.236"> स्वास्थ्य रणनीति। >
< start="3099.029" dur="5.004"> त्यसोभए विगतमा त्यो परिष्कृत हुन्छ >
< start="3101.131" dur="5.605"> सार्वजनिक स्वास्थ्य रणनीति र >
< start="3104.167" dur="3.37"> स्टार्ट आर्थिक वृद्धि र >
< start="3106.87" dur="7.307"> त्यो हामीसँग के छ - त्यो हो >
< start="3107.671" dur="11.143"> हामी के मार्फत काम गर्छौं। >
< start="3114.311" dur="6.105"> >> के तपाईंलाई प्रभाव पार्छ? >
< start="3118.948" dur="2.536"> के तपाईं स्थानमा राख्नुहुन्छ >
< start="3120.55" dur="2.969"> तपाईंको आफ्नै स्पीडमा? >
< start="3121.618" dur="2.802"> >> फेडरर >
< start="3123.653" dur="2.969"> सम्पन्न दिशानिर्देशहरू। >
< start="3124.554" dur="4.971"> उनीहरूलाई निर्देशनहरू भनिन्छ >
< start="3126.756" dur="5.405"> किनभने तिनीहरू दिशानिर्देश हुन्। >
< start="3129.659" dur="3.336"> र ती तथ्याES्कहरू अनुसरण गर्न सक्छन् >
< start="3132.295" dur="2.469"> मार्गनिर्देशनहरू। >
< start="3133.129" dur="5.505"> तथ्या .्क फैशन गर्न सक्छन् >
< start="3134.898" dur="4.203"> तिनीहरूको विशिष्ट फिट गर्न दिशानिर्देशहरू >
< start="3138.768" dur="1.501"> सर्कसन्टान्स। >
< start="3139.235" dur="2.436"> त्यहाँ कुनै शंका छैन कि न्यू योर्क >
< start="3140.403" dur="2.302"> एक फरक र थियो >
< start="3141.805" dur="3.536"> जस्तोसुकै समस्या भए पनि >
< start="3142.839" dur="4.17"> देश, सही? >
< start="3145.475" dur="1.801"> त्यो तपाइँको हरेक नम्बर हो >
< start="3147.143" dur="2.669"> हेर्नुहोस्। >
< start="3147.41" dur="3.27"> त्यो तपाईंलाई थाहा छ कि सबै तथ्य। >
< start="3149.946" dur="3.47"> त्यहाँ कुनै शUB्का छैन। >
< start="3150.814" dur="7.24"> हामी यहाँ एक ठूलो चुनौती छ >
< start="3153.55" dur="8.541"> शहरको संख्या भन्दा नयाँ काममा >
< start="3158.188" dur="4.304"> र सबैभन्दा बढि मध्येको एउटा >
< start="3162.225" dur="5.271"> ECONOMIES >
< start="3162.625" dur="6.974"> र ती सबै लिनु पर्छ >
< start="3167.63" dur="3.937"> र म आवश्यक आईएफएस जान्दिन >
< start="3169.733" dur="4.003"> TULSA वा SAN को लागी काम गर्दै >
< start="3171.701" dur="3.27"> एन्टोनियो। >
< start="3173.87" dur="2.702"> त्यसो भए हामी योजनाको साथ आउनेछौं >
< start="3175.105" dur="3.102"> त्यो न्यूयोर्क र को लागि काम गर्दछ >
< start="3176.706" dur="2.402"> फेडरल सरकारले भनेको छैन >
< start="3178.341" dur="1.535"> हामी केहि पनि म्यान्डेट गर्दछौं। >
< start="3179.242" dur="5.672"> उनीहरूले भनिरहेका छन् हामी प्रस्तुत गर्दै छौं >
< start="3180.009" dur="6.306"> मार्गनिर्देशनहरू। >
< start="3185.048" dur="6.673"> >> तपाईं के बनाउँछ >
< start="3186.449" dur="6.706"> राष्ट्रपतिको टीम भन्दै छ >
< start="3191.855" dur="4.67"> स्वयं क्वारन्टीन र >
< start="3193.289" dur="7.908"> दोस्रो प्रश्न तपाईंलाई दिनेछ >
< start="3196.659" dur="5.139"> तपाईले आफैलाई क्वारेन्टाइन सिन्सेस गर्नुभयो >
< start="3201.331" dur="1.168"> न्यू योर्क इस्टर्डेमा। >
< start="3201.931" dur="1.868"> >> राष्ट्रपतिले कुनै पनि भने >
< start="3202.632" dur="2.802"> त्यो न्यू योर्क शहर को लागी यात्रा >
< start="3203.933" dur="1.835"> दुई को लागी स्वयं-क्वारन्टीन >
< start="3205.568" dur="0.667"> हप्ता >
< start="3205.901" dur="1.535"> >> न्यू योर्कमा। >
< start="3206.369" dur="3.136"> >> न्यू योर्क शहरमा। >
< start="3207.57" dur="3.47"> >> होईन, यदि तपाईं न्यू योर्कमा जानुहुन्छ भने >
< start="3209.639" dur="1.802"> शहर तपाईं नयाँ मा Quantant हुनु पर्छ >
< start="3211.174" dur="2.302"> यार्क राज्य। >
< start="3211.574" dur="2.869"> तपाइँ पछाडि नयाँ जानु हुँदैन >
< start="3213.61" dur="4.804"> यार्क सिटी क्वारेटिन गर्न। >
< start="3214.577" dur="4.271"> म नयाँ मा क्वारेटिन जाँदैछु >
< start="3218.548" dur="8.208"> यार्क राज्य। >
< start="3218.981" dur="9.009"> >> त्यो एक मेडिकल सल्लाहकार हो। >
< start="3226.89" dur="3.002"> जीवनमा सब भन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा >
< start="3228.124" dur="4.704"> तपाईंलाई थाहा छैन के थाहा छ। >
< start="3230.026" dur="4.137"> मलाई औषधि थाहा छैन र म >
< start="3232.962" dur="3.17"> डक्टरमा जानुहुनेछ। >
< start="3234.297" dur="4.037"> मलाई लाग्छ तपाईलाई अनुसरण गर्नुहोस् >
< start="3236.266" dur="3.169"> सीडीसी दिशानिर्देशहरू र सीडीसी >
< start="3238.468" dur="2.402"> दिशानिर्देशनहरू तपाईंलाई सिफारिस गर्दछन् >
< start="3239.569" dur="3.369"> रहनुहोस् एक DISTANCEWWWAY। >
< start="3241.004" dur="3.936"> सामाजिक रूपमा निराशाजनक र >
< start="3243.072" dur="3.737"> यो नयाँ यार्कको रूपमा पछाडि छ >
< start="3245.074" dur="3.637"> सरकार ब्यबस्थापित। >
< start="3246.943" dur="9.943"> >> स्पेन्सी] तपाईंलाई भनिरहेको छ >
< start="3248.845" dur="12.245"> Quareantine गर्नुपर्छ। >
< start="3257.02" dur="5.638"> >> तिनीहरूले सामाजिक बिरामी पर्छ। >
< start="3261.224" dur="1.768"> यी केसहरू सबै भन्दा माथि छन् >
< start="3262.792" dur="3.036"> COUNTRY >
< start="3263.125" dur="20.421"> यो न्यू योर्क मात्र होइन। >
< start="3265.962" dur="18.952"> हामी फोर्रन्टमा छौं। >
< start="3283.68" dur="3.469"> >> यदि हामी अझ बढी प्राप्त गर्न सक्दैनौं >
< start="3285.047" dur="5.439"> फेड्सबाट, मलाई कसरी थाहा छैन >
< start="3287.283" dur="5.839"> हामी बुजलाई लेख्छौं। >
< start="3290.62" dur="5.038"> त्यो किन यो सेनेट बिल हो >
< start="3293.256" dur="11.344"> धेरै ट्र्रोबल। >
< start="3295.792" dur="11.978"> मलाई प्ले नाइसको राजनीति थाहा छ >
< start="3304.734" dur="5.505"> र कुनै पनि दबावमा राख्नुहुन्न >
< start="3307.904" dur="3.303"> अरू कुनै पनि निर्वाचित अधिकृत, >
< start="3310.373" dur="19.486"> अर्को उनीहरूले तपाईंलाई तपाईं छ भन्नेछन् >
< start="3374.17" dur="1.001"> यो काम थिएन। >
< start="3374.87" dur="0.301"> यो खुशी हो। >